ခင်လေးငယ် : April 2012
ကျွန်တော် နဲ့ သူ သိပ်ချစ်မိ သွားကြတာ အတော်လေး တော့ ထူးဆန်းနေနိုင် ပါတယ်..။ ပြန် ပြောပြ ရမယ် ဆိုရင် လည်း စကားလုံး တွေ က သိပ်တော့ မရှိပြန် ပါဘူး။ နှလုံးသား ထဲကို အလိုလို ရောက် လာပြီး နူးနူးညံ့ညံ့လေးနဲ့ အခိုင်အမာ သန္ဓေ တည် သွားတာ မျိုးလေး ပါပဲ..။ ကျွန်တော့်ခြေ တွေ သူ့ဆီ လှမ်း မသွားခဲ့ သလို သူလည်း ကျွန်တော့် ကို မကမ်း ခဲ့ ပါဘူး..။
ဒါပေမဲ့ အံ့သြစရာ ကောင်းတာ က ကျွန်တော် တုိ့ ဆုံမှတ် တစ်ခုလေး အပေါ် မှာ အတူတူ ရပ်မိ သွားကြတယ် ဆိုတာပါပဲ..။ ရင်ခုန် စရာ သိပ်ကို လှပတဲ့ ဆုံမှတ်လေး ပေါ်က စက်ဝိုင်းလေး တစ်ခု ထဲ မှာ ရပ်နေ တဲ့ ခြေထောက် လေး နှစ်စုံ ရှိနေ ပါတယ်..။
အခိုင် အမာ အမှတ် တရ ရှိနေစေတဲ့ အရာတွေ ကတော့ ပြောလို့မကုန်နိုင်အောင် အများကြီးပဲပေါ့...။ သူဟာ ကျွန်တော့် အတွက် နှစ်လိုဖွယ် အကောင်းဆုံး အမျိုး သမီး ဖြစ် သ လို သူက လည်း ကျွန်တော့် အမူအကျင့်တွေကို မြတ်နိုးပေးတတ်သူ တစ်ယောက် ပါ။
ကျွန်တော်နဲ့ သူ့မှာ တူတဲ့ အလေ့အထလေးတွေ အတော် များ ပါ တယ်..။ အတူညီ ဆုံး မူဟန် တစ်ကွက် ကတော့ ကျွန်တော် တို့ နှစ်ဦးလုံး ပေပေ တေတေနဲ့ လမ်းတွေ လျှောက် နေတတ်ကြခြင်း ပဲပေါ့။ ကျွန်တော် တို့ ဆုံဖြစ်ကြ တိုင်း တစ်ယောက် ပုံစံ တစ်ယောက်ကြည့် လို့ ရယ်မော မိကြတာ လည်း အကြိမ်ကြိမ်။
ကျွန်တော် တို့ ဟာ အပေါ်ယံမျက်လုံးတွေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ကို စာဖတ် ဖို့ မကြိုးစား သလို ဟန်ဆောင်ခြင်း တွေ ကို မီးရှို့ကာ ပြာချ ထားတတ် ကြသူတွေ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်...။
ငွေကြေး ဂုဏ်ပကာသန အရှိန်အဝါတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း အာရုံဝင်စား ဖို့ မတတ်ကြသူတွေပါပဲ..။ ကျွန်တော့် လက်တစ်ဖက် ကမ်းပေးလိုက် တာနဲ့ အပြုံး လက်လက်လေး နဲ့ သူ့လက်ဖဝါးလေး ကို လာထည့်ပေး တတ်သူဟာ ကျွန်တော့်သူပဲပေါ့။ ထွေထွေ ထူးထူး ကြိုးညှိ စရာ မလိုပါပဲ အော်တိုလေး ကာရံ ညီ သွားကြမြဲ ပါပဲ..။ သူနဲ့ ကျွန်တော် ဟာ တောက်ပြောင်ပြောင် အဝတ်စားမျိုး ကို မုန်းတီးခြင်း ဋီကာချဲ့ လို့ အထူး အဆန်းနဲ့ အရောင်တွေ အကြောင်း အလု အယက် အတင်းပြော တတ်ကြ သူတွေ လည်း ဖြစ်ပါ တယ်..။ ဖွာကျဲကျဲ ဆံပင်တွေ ကိုယ်စီနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဟာ အရောင် ပျယ် ဂျင်းဘောင်းဘီတွေ ဖရို့ဖရဲ ဝတ်ရခြင်း ကို ခုန်မင်တတ် သူတွေပါ။
ငြိမ်သက် နေရာ ကနေ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ရုတ်တရက် နှုတ်ကထုတ်ဆိုမိတိုင်း သူလည်း ကောက်ခါငင်ခါနဲ့ အဲ့ဒီသီချင်း ကိုပဲ ဆိုညည်း လိုက်တာမျိုး တူနေ တတ် ပြန်သေး တယ်..။
ချစ်ဖို့ကောင်း တဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုလေးတွေ ကျွန်တော်နဲ့ သူ့ကြားမှာ ခဏခဏ ကြုံရတတ်ပါတယ်..။ လူတွေ ကြားထဲမှာ တိုးဝှေ့ ဆွဲခေါ် ရင်း သူ့လက်လေးကို တင်းနေအောင် ဖျစ်ညှစ် လိုက်ရင် သူက သူမှီတဲ့ ကျွန်တော့် မေးစေ့ကို ခေါင်းလေးမော့ပြီး ဖြတ်ကနဲ နမ်းတတ် တဲ့ သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်..။ ရှုပ်ပွနေပြီးသား သူ့ ဆံနွှယ်တွေ ကို မျက်လုံးတွေ ဖုံးတဲ့အထိ ကျွန်တော် စနောက်ကာ ဖွတတ် တဲ့ အခါ တိုင်း ဂျစ်ပေပေ မျက်စောင်းနဲ့ ဝေ့ကြည့်တတ်သေးတယ်..။ ဒါပေမဲ့လည်း သူ့နှုတ်ခမ်းပါးလေး တွေကတော့ ပြုံးနေ တာ ပါပဲ...။
သူ့ရဲ့ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်လေး အပြုံးလေးတွေ မြင်နေ ရရင် ကျွန်တော်ကျေနပ်နေသလို ကျွန်တော် ပျော်နေတိုင်း လည်း သူ့ဘဝ.. လို့ ကဗျာ ဆန်ဆန် ပြောတတ်သေးသူပေါ့..။
ကျွန်တော် သူ့ကို ချစ်စရာ အမည်းရောင် ဂစ်တာလေးတစ်လုံး လက်ဆောင်ပေးဖူးပါတယ်..။ သူ တစ်ယောက် ထဲ ရှိနေတဲ့ အချိန် တွေ မှာ ကျွန်တော့်ဆီက ရတဲ့ ဂစ်တာလေး နဲ့ စကားတွေ ပြောတတ်တဲ့ အကြောင်း ကျွန်တော့်ကို ပြန်ပြောရင်း ရှက်စနိုးနဲ့ ရယ်မော တတ်ပြန် သေးတယ်.။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် ဟာ ဂစ်တာလေးကို အထီးအမ ခွဲရင်း သားလေးလား..! သမီးလေးလား..! လို့ ငြင်းခုန် တတ်ကြ ပါသေးတယ်..။ “ဟိုမကျ ဒီမကျ အခြောက်လေးများ ဖြစ်နေရင် ဒုက္ခ...” လို့ ကျွန်တော် နောက်ပြောင် ရင်တော့ သူ မကြိုက် ပါဘူး။
အဲ့လို စနောက်တိုင်းလည်း ကလေးတစ်ယောက်လို စိတ်ကောက် ပြန် တာ ကျွန်တော့်သူ... ပဲပေါ့..။ ကြာရှည် စိတ် မကောက် တတ်တဲ့ သူ့စရိုက်လေးကိုလည်း ကျွန်တော် အရမ်း ကို ချစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ သူစိတ်ဆိုးအောင် စိတ်ရှည်ရှည် နဲ့ ခဏ ခဏ စတတ်သူပါပဲ..။
ကျွန်တော် တို့ ချစ်သူ့သက်တမ်း တလျှောက်လုံးမှာ ကြီးကြီးမားမား တစ်ခါမှ ရန်မဖြစ်ဖူးကြပါဘူး..။
ကျွန်တော် နဲ့ သူ့ကြားမှာ ချည်နှောင်ထားတဲ့ ကြိုးတွေကို သူများတွေ မြင်သာအောင် ချပြဖို့မလိုအပ်ဖူးလို့ ခံယူ ထားကြ သူတွေပါပဲ.။ သူဟာ ကျွန်တော် သိပ်ချစ်တဲ့ ချစ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်သလို ကျွန်တော့် အတွက် အရမ်း လိုအပ်တဲ့ တိုင်ပင်ဖော် သူငယ်ချင်း ဆိုလည်း မမှားပြန်ဘူး..။ ကျွန်တော့် သူ့ကို အစ်မ တစ်ယောက် လို လေးစား မြတ်နိုး သလို ကျွန်တော့် ညီမငယ်လေး တစ်ယောက် လိုလည်း သူ့ကို ပူပန်တတ်သေး တယ်..။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ယုံကြည်မှု အပြည့် အဝ ပုံအပ် လက်ချင်းတွဲ လို့ လမ်းတွေ ဆက် လျှောက်နေ ကြတာပါပဲ..။
မိခင် တစ်ယောက် က ကလေးတစ်ယောက်ကို ယုယသလိုမျိုး သူပေးတဲ့ အကြင်နာတွေ ရတတ်ချိန်တိုင်း မျက်ရည်ဝဲ လောက်အောင် အထိ ကျေးဇူး တင် ကြည်နူးရသူ ဟာ ကျွန်တော်ပါပဲ..။
လူတွေကြား ထဲ လက်တွဲသွားရင်း ကျွန်တော့်ကို လှည့်ကြည့်တတ်တဲ့ ကောင်မလေးတွေ တွေ့ခဲ့ရင်လည်း သူဟာ အပြုံးမပျက် တတ်သူ မျိုးပေါ့..။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် ကလည်း သူ့ကို ဂရုတစိုက်ရှိတတ်တဲ့ အမျိုးသား တွေ ရှိနေရင်တောင် ဝန်တိုစိတ်ဆိုတာမျိုး လုံးဝ မဖြစ်တတ် ပါဘူး..။ ဒါဟာလည်း ကျွန်တော်နဲ့ သူ့ရဲ့ အပြန် အလှန် အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်မှုတွေကြောင့်ပါပဲ..။ ကျွန်တော်နဲ့သူ ကိုယ်ဆီ အိမ်ပြန်ဖို့ လမ်းခွဲ နှုတ်ဆက် ချိန်တွေမှာ “စိတ်ချမယ်နော်...” လို့ ကျွန်တော်ပြောတိုင်း.. သူကလည်း ကျွန်တော့် ကို ပြုံးကြည့် ရင်း ခေါင်းလေး ညိတ်ပြ တတ်ပါတယ်..။
တခါတလေတော့ ခေါင်းကိုငဲ့စောင်းလို့ မျက်လုံးလေးတွေစွေပြီး ချစ်စနိုးလုပ်တတ်တဲ့ သူ့ မျက်စောင်းလေး ကို ချွင်းချက် အဖြစ် ကျွန်တော် ရတတ် ပါသေးတယ်..။
ကျွန်တော် သူ့ ကို ဘယ်အရာမျိုးမှာမှ ပိတ်ပင်တားဆီး ချုပ်ချယ်တာမျိုး မလုပ်တတ်ပါဘူး..။ ပွင့်လင်း ထက်ြမက်တဲ့ သူ့စိတ်လေးကို ကျွန်တော် အလေးထား အသိအမှတ်ပြု လို့ မြတ်နိုးပါတယ်။ သူဟာ အမိန့်ပေး ခံရခြင်းကို မုန်းသလို သူ့ဘောင်လေးထဲမှာ ပျော်ရွှင် လွတ်လပ်စွာ နေထိုင်လှုပ်ရှား နေခြင်းကို သူ ကိုယ်တိုင် လေးစား တန်ဖိုးထား တတ်တာကို ကျွန်တော်သိနေလို့ပါ..။ ကျွန်တော် တစ်ခုခု ကို အလွန် အကျွံ မဖြစ်စေဖို့ သူ သတိပေးတတ်သလို ကျွန်တော် ကလည်း သူ့ ကျန်းမာရေး နဲ့ ပတ်သက် လို့ သူ နားလည် လက်ခံ အောင် ပါးပါးလေး လှစ်ကာ ပြောပြနားချမိ တတ်ပါတယ်..။
သူ သတိပေးသမျှ ကို ကျွန်တော် ခေါင်းညိတ်နားထောင်သလို သူကလည်း ကျေကျေနပ်နပ် ဆင်ခြင် နေထိုင် ပေးတတ် လို့ ကျွန်တော် သူ့ ကို အချစ်ပိုရပြန်တာပါပဲ..။
သူဟာ ကျွန်တော့် ကို အတိုင်းထက် အလွန် နားလည်ပေးတတ်သူပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။ သူနဲ့ ပတ်သက်လို့ အကြိမ်ကြိမ် ကျွန်တော့် ကိုယ် ကျွန်တော် အား မရ ဖြစ်မိတတ်တယ်..။ သူ စိတ်ညစ်သွားမှာ မျိုးကို ကျွန်တော် မလိုလား ပါပဲ မတတ်သာ တဲ့ အခြေအနေ တွေပေါ်မှာ နင်းလျှောက် ရ တိုင်း ကျွန်တော့် စိတ် ခြေလှမ်း တိုင်း က လေးပင် တွန့်ဆုတ်နေ တတ်တာ ဘယ်သူမှ သိနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ သူ့ကို ကျွန်တော် စိတ် မဆင်းရဲစေ ချင်တာ ကျွန်တော်သာ အသိဆုံးမို့ပါ..။ ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့တစ်နေရာရာ မှာ သူရှိကို ရှိနေမှဖြစ်မှာပါ..။ ကျွန်တော် သူ့ ကို အဲ့လောက် ထိ လိုအပ်ပါတယ်..။
သူ့ဆန္ဒ သူ့အလို မှန်သမျှ ကို အလိုက်တသိ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ ကျွန်တော် ဖြစ်ချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် သူ့ကို ရည်းစား ဘယ်နှစ်ယောက်ထားခဲ့ဖူးလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုး မေးဖို့စိတ်မဝင်စားသလို သူ သိနေတဲ့ ကျွန်တော့် အတိတ်တွေ နဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ကျွန်တော့် ကို စိတ်ရှုပ်အောင် မလုပ် တတ် ပါဘူး..။ ကျွန်တော် တို့ နှစ်ယောက် လုံး ပစ္စုပ္ပန်ကို မြတ်နိုး ပါတယ်..။ “ဒီနေ့..” ဆိုတာ ကို ချစ်ပါတယ်...။ “ဒီနေ့..” ကျွန်တော် သူ့ မျက်နှာလေး ပြုံးသွား အောင် ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ တွေး သလို သူကလည်း “ဒီနေ့..” ကျွန်တော့် ကို ဘယ်လို ယုံကြည် နားလည်မှုတွေ ထပ်ပေးနိုင်မလဲ ကျိုးစားနေတာကို ကျွန်တော် သိနေ ပါတယ်..။
သူ့ အရိပ်တွေနဲ့ “ဒီနေ့..” ဆိုတာကို ကျွန်တော် ဆုပ်ကိုင်နိုင်သလို ကျွန်တော့် မေတ္တာတွေနဲ့ ဒီနေ့လေးမှာ သူ့ စိတ်တွေ ကို အေးချမ်းပျော်ရွှင်ခွင့်လေး ပေးနေပါရစေ..။
ကျွန်တော့် အတွက် ဒီနေ့ဟာ လှပပြီး သူ့အတွက် သူပိုင်ဆိုင်ရမဲ့ ဒီနေ့လေးမှာ ကျွန်တော်နဲ့ အတူတူ နှစ်နှစ် ခြိုက်ခြိုက်လေး ပြုံး နေနိုင် ပါစေ...။ ကျွန်တော်တို့ကို မနက်ဖြန် အကြောင်းလေး ခဏလောက်တော့ မေ့ထား ခွင့်ပေးပါ..။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် လုံး ဘဝ အတွက် လုပ်ဆောင်စရာတွေ အမောတွေ အများကြီး ရှိနေသေးတာ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင် သိထားကြပါတယ်..။ ဒါပေမဲ့ ... ကျေးဇူးပြု ပြီး ထပ်ပြော ပါရစေ.... ကျွန်တော်နဲ့သူ့ကို မနက်ဖြန်တွေအကြောင်း ဒီနေ့မှာ မေ့ ထားနိုင် ဖို့ ခဏလေး တော့ ခွင့်ပြုပေး ကြပါ...။
ဒီနေ့လေး မှာ ကျွန်တော် သူ့ပါးလေးတွေကို နူးညံ့ကြင်နာစွာနဲ့ ဖွဖွလေး နမ်းပါရစေ..။
သူ က လည်း သူ့ လက်ဖဝါး နွေးနွေးလေးတွေနဲ့ ကျွန်တော့်လက်တွေကို မြတ်မြတ်နိုးနိုး ပြန်လည်ဆုပ်ကိုင်ထား ပါလိမ့်မယ်..။
ဒီနေ့လေး ကို ကျွန်တော်နဲ့ သူ ကြည်နူးစွာနဲ့ သိပ်ကို လိုလားပါတယ်။
ကျွန်တော် တို့ ရဲ့ မျက်လုံးတွေကိုမှိတ်ပြီး “ဒီနေ့..” လေးကို သာယာငြိမ်သက်စွာနဲ့ ချိုမြိန်နာရီတွေပေါ်မှာ တွဲခိုစီး လို့ နေနေပါရစေ..။
ချော့ကလက် နံ့လေးတွေ ထုံအီနေမဲ့ ရောင်စုံအိပ်မက် လှလှလေးတစ်ခုကို အတူတူမက်ရင်း “ဒီနေ့..” လေး ကို ရင်ခုန်သံတွေနဲ့ ဖြတ်ကျော် ခွင့်ပေးပါ....။
ကျွန်တော် တို့ နှစ်ယောက် သိပ် ကို မျှော်လင့်ခဲ့ကြတဲ့ “ဒီနေ့..” လေး ကို ကျွန်တော်နဲ့.... သူ.... .... .... .... ....!!!!
တူငယ်...တူမငယ်၊ မောင်ငယ်...ညီမငယ်လေးတွေအတွက် ဗာလင်တိုင်း လက်ဆောင် အဖြစ် အမှတ်တရ ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး လေး ရေးဖွဲ့ တာပါ။ ချစ်တတ်သူတိုင်း နူးညံ့ ရင်ခုန်သံတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်သာယာ ကြည်နူးနိုင်ကြပါစေ....။
Posted by Khin Lay Ngel at 4/30/2012 10:09:00 PM No comments:
ရွက်ဝါတွေ ကြွေကျနေတဲ့ လမ်းဆုံပေါ်မှာ ခြေအစုံကိုရပ်မိတော့ သတိရ လွမ်းဆွတ်စိတ်တို့က ရင်ဝဆီတိုးဝှေ့ ဝင်ရောက် လာကြတယ်..။ လမ်းမကြီးတစ်ခုလုံး ရွက်ဝါတွေ ခင်းထားလိုက်တာများ ညိုဝါဝါပျိုးခင်းကြီး တစ်ခုလိုပါပဲ...။ အက်ကွဲကွဲ ရှတတ အရသာ တစ်ခုကို ခံစားလိုက်ရတယ်။ ခပ်လှမ်းလှမ်းဆီမှာ ရွက်ခြောက်တွေနဲ့ ဖုံးအုပ်နေတဲ့ ခုံတန်းလျားတစ်ခု... လွမ်းဆွတ်ဖွယ် ပန်းချီကားလေး တစ်ချပ်အတိုင်း အထီးကျန်စွာ လှပလိုက်နေရဲ့..။
ကားတွေ ဖြတ်သွားဖြတ်လာ မရှိတဲ့ ဒီလမ်းဆုံလေးက ဟိုး... အရင်တစ်ချိန်တုန်းကလို မပြောင်းလဲ..။ ခြောက်သွေ့ တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်ဆဲ..။ နွေဦးရဲ့လေရူးတွေက ဝတ်ထားတဲ့ အင်္ကျီအဖြူလွလွလေးကို ဆော့ကစား ကြည်စယ်နေတာကရော ရာသီ အပြောင်းရဲ့ ပုံသေကားချပ်တစ်ခုကို အဓိပ္ပါယ် လှစ်ဟပြနေသလိုမျိး...။
တစ်ဖြူးဖြူး လေသံတွေကို ကဗျာတစ်ပုဒ်လို ဖတ်ချင်လာမိပြန်ပြီ..။ ကျွန်မ လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းရဲ့ ပါဝါကို ပိတ်လိုက် တယ်..။ လေတိုးသံတွေကလွဲလို့ တခြားအသံတစ်ခုရဲ့ နှောက်ယှက်မှုမျိုး မလိုလားမိတာ အမှန်ပါ..။ ဒီလမ်းဆုံမှာ အထပ်ထပ် ချဖူးတဲ့ ခြေရာလေးတွေအကြောင်း ခေါင်းထဲရောက်လာပြန်တယ်..။ လမ်းဆုံမှာ ဘဝမဆုံခဲ့တဲ့ လူနှစ်ယောက် ကရော... ဘဝကိုယ်ဆီကို ဘယ်လိုအနေအထားတွေနဲ့ ဘယ်လိုလမ်းတွေ ပေါ်မှာများ လျှောက်လို့နေကြပြီလဲ..!!
သေချာတာ ကတော့ အဲ့ဒီလူသားနှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်- ဒီလမ်းဆုံပေါ်မှာ အခု... လက်ရှိရပ်နေမိခြင်းပဲ မဟုတ် လား..။ ရင့်ကျက် လာသလိုနဲ့ မရင့်ကျက်သေးတဲ့ စိတ်ကို သတိပြုမိချိန်မှာ ကလေးမငယ်ငယ်လေး တစ်ယောက်လို ကျွန်မ ကိုယ် တိုင် ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်ချင်လာပြန်ရော...။ ဆည်းဆာရဲ့ တောက်ပနေတဲ့ နေခြည်က ညိုဝါဝါ ရွက်ဟောင်းခင်း ကို ရွှေရောင်တင်ပေး လိုက်သလို ဝင်းဝါလို့ လှပလွန်းလိုက်တာ..။
အခုလို ရာသီရောက်တိုင်း ရာသီစာ ကဗျာ တစ်ပုဒ်ကို ဖတ်ဖို့ လာခဲ့ဖူးတဲ့ နှစ်တွေ တောင် ထပ်တိုးလို့ လာခဲ့ပေါ့...။ ဒီနှစ်တော့ ဒီနေရာလေး အရောက် ကျွန်မ စိတ်တွေ ပိုပြီး ထူးခြား လို့ နေခဲ့တာပါ။ ကဗျာ ဖတ်ရင်း စာရေးချင် လာတဲ့ စိတ်တွေနဲ့ မွတ်သိပ် လို့ နေလိုက်တာ များ...။ အတွေးတွေ ထဲမှာပဲ စာနိဒါန်းကို အစပျိုး လိုက်ခဲ့မိ..။ ကျွန်မ ဆံနွယ်တွေ လိုပဲ စကားလုံး တွေက ဖရိုဖရဲ နဲ့ လူးလွန့်တက် လာခဲ့ပေါ့..။ လှပ သေသပ် တဲ့ စာ တစ်ပုဒ် ဖြစ်လာဖို့ အထိတော့ ကျွန်မ ပိပိရိရိ ရေးနိုင် လိမ့်မယ် မထင်..။
ဒီလိုနဲ့ပါပဲ တွေးရင်း၊ ငေးရင်း၊ လွမ်းဆွတ် ရင်း၊ မျက်လုံးတွေ က ဘာမှ ထင်ကျန်မနေတဲ့ ခြေရာတွေ နောက်- ထပ်ချပ်မခွာ လိုက်ရင်း၊ လေရူးတွေ ဆော့မြူးနေ တာကို ကြည်နူးရင်း၊ သူတို့တွေ ပေးဖတ်တဲ့ ကဗျာ တွေကို တစ်ရွက်ပြီး တစ်ရွက် လှန်ရင်း ပါပဲ..။ ကျွန်မ အတွေးထဲမှာ စရေးထားတဲ့ နိဒါန်းတွေက ရုတ်တရက်နဲ့ အငွေ့ပျံ ထွက်ပြေး သွားကြ တယ်..။ သူတို့လေးတွေ ငွေ့ရည် ဖွဲ့ပြီး ပြန်ရောက်လာတာကတော့ ကျွန်မရဲ့ မျက်ဝန်းတွေဆီကိုပါပဲ..။ နေဝင် ဆည်းဆာရဲ့ ရီဝေဝေ ပုံရိပ်က မျက်ရည်ကြည်တွေနဲ့ လဲ့ပြီး ပိုလို့ လှပ ပြည့်စုံ လာသလို...။
ကျွန်မ ငြိမ်သက်ခြင်း နဲ့ ဖျော့တော့တော့ အသက်ရှုနေမိရဲ့..။ ရွက်ခြောက် တွေပေါ်ကို ညင်ညင်သာသာ နင်းလျှောက်ရင်း ခုံတန်းလေးဆီကို တရွေ့ရွေ့။ ခုံတန်းထောင့်လေး ပေါ်က သစ်ကိုင်းခြောက်လေး ကို လက်လေးတစ်ဖက်နဲ့ ဖယ်ထုတ်ရင်း ခပ်လျော့လျော့ ထိုင်ချလိုက်မိပါတယ်။ ဝန်းကျင်တစ်ခု လုံး လေတိုး သံတွေက လွဲလို့ အရာရာဟာ ပကတိ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာ လဲလျောင်းလို့ပေါ့..။ အငွေ့ပျံသွားတဲ့ နိဒါန်းကို စာပြန်စီရင်း နောက်တစ်ကြောင်းကို ထပ်စတော့... ခပ်နွဲ့နွဲ့ ရယ်သံလေး တစ်ချို့က နွေလေညှင်းနဲ့အတူ ကျွန်မနားဝဆီ တိုးဝင် ရောက်ရှိ လာခဲ့ပါတယ်..။
ကျွန်မ လှမ်းကြည့်မိလိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ......။ ကောင်မလေး တစ်ယောက် ခိုးခိုး ခစ်ခစ်လေး ရယ်မောလို့.. ကောင်ကလေး တစ်ယောက်ကလည်း ကောင်မလေးရဲ့ လက်ကလေး ကို ကြင်ကြင်နာနာ ဆုပ်ကိုင်ထားလျက်..။ ကောင်လေးရဲ့ နဖူးပေါ်မှာ ဆံနွယ် ခပ်ပျော့ပျော့တွေက ဝေ့ဝေ့ ဝဲဝဲလေး...။ ကောင်မလေး မျက်နှာ တစ်ခြမ်းကိုတော့ ဆံနွယ်ရှည်တွေ ဖုံးအုပ်ထားတယ်။ ကောင်မလေးမျက်နှာပေါ်မှာ ဖုံးအုပ်နေ တဲ့ ဆံပင် ရှည်တွေ ကို ကောင်လေးက သပ်တင်ပေးတော့ ကောင်မလေးက ခေါင်းကိုရမ်းခါလို့ ဆံနွယ်တွေကို ပို ရှုပ်သွားအောင် လုပ်ရင်း ကြည်စယ် စနောက်လို့နေပါတယ်..။
ကိုယ်စီ မျက်ဝန်းလေးတွေထဲမှာ နုနယ် ဖြူစင်ရှင်းသန့်ခြင်းတွေက အတိုင်းသား...။ သူတို့ ကို လှမ်းကြည့်ရင်း ကျွန်မ နူးနူးညံ့ညံ့ရင်ခုန် ကြည်နူးလာခဲ့ပေါ့...။ ကောင်မလေး ပုခုံးပေါ်က လျှောကျလု လွယ်အိပ်လေးကို ကောင်လေးက ပြန်တင်ပေးရင်း.. နဖူးလေးကို ငုံ့အနမ်း.. ခေါင်းငုံ့ တိမ်းရှောင် လိုက်တဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ မျက်နှာလေးကို ကောင်လေးက စိုက်ကြည့်ရယ်မောလို့..။ အနမ်းလေးအစား နဖူးကို လက်သီးဆုပ်လေး နဲ့ ဖွဖွလေးတို့ထိရင်း ကြည်စယ်နေပြန်သေးရဲ့...။ ကောင်မလေးက ခြေဖျားလေးကို ထောက်- ခေါင်းလေး ကို မော့ရင်း ကောင်လေးရဲ့ နားတစ်ဘက် အနားကပ်ပြီး တစ်စုံတစ်ရာ အပြောမှာ... ကောင်လေးက ရယ်သံကိုဖြတ်ချတယ်...။
အဲ့ဒီနောက် ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်ကို တိုးတိုးလေး ရွတ်ပြ နေပေါ့..။ သူတို့ မျက်နှာလေးတွေမှာ သွက်လက် ဖြူစင်မှုတွေ နဲ့ ငြိမ်းချမ်းလိုက်တာ..။ ကောင်လေးရဲ့ ကဗျာရွတ်သံကို နားထောင်နေတဲ့ ကောင်မလေးက မျက်လုံးလေးတွေကို ဖွဖွလေး မှိတ်ထားတယ်..။ ကဗျာလေး ရွတ်အပြီး ကောင်လေးက ကောင်မလေးရဲ့ လက်ဖဝါးလေးကို ခပ်တင်းတင်း ဆုပ်ကိုင်တော့ ကောင်မလေးက လက်ကလေး ကိုရုန်းရင်း.....
ကောင်လေးက ချစ်စနိုးမူဟန်နဲ့ မျက်မှောင်ကျုံ့ရင်း ကောင်မလေးမျက်နှာနားကို ဝေ့ကျလာတဲ့ ရွက်ဝါလေးတစ်ရွက်ကို လှမ်းဖမ်း လိုက်တယ်..။ ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ လက်ကလေးကို တယုတယဖြည်ချရင်း ရွက်ဝါလေးကို ကောင်မလေးလက်ထဲ ထည့်ပေး လိုက်ပြန် တယ်..။ ကောင်မလေးရဲ့ တိုးဖွဖွ အသံ ချိုချိုလေးတစ်သံ သူ့ နှုတ်ခမ်းပါးလေးတွေဆီက ခုန် ထွက်ကျ လာတယ်..။
အိုး... ဒီအသံတွေ နဲ့ ဒီပုံရိပ်လေးတွေကို ကျွန်မရင်းနှီး နေလိုက်တာ..။ အာရုံ ထပ်စိုက်ရင်း သေချာနားထောင်မိတော့...
ကျွန်မ..!! ဟုတ်တယ်.. ဒါကျွန်မရဲ့ ရယ်သံတွေ..။ သေချာပါတယ် ဒါဟာ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ရဲ့ ရယ်သံတွေနဲ့ ကျွန်မပါပဲ..။ လွယ်အိပ်လေး ကရော ကျွန်မရဲ့ လွယ်အိပ်ကလေး..!! ကောင်မလေးရဲ့ ဆံနွှယ်တွေ..!! အို.. ကျွန်မဆံနွယ်တွေပဲ မဟုတ်လား...!!
"မောင်က အများကြီး ပိုပါတယ်..."
ဟင်..!! ဒါ... ဒါဟာလည်း... သူ... သူ့အသံ..!! သူ့အသံလေး..!! နွေးထွေးနူးညံ့ ချိုသာလိုက်တာ..။ သူ့လက်ချောင်း ရှည် သွယ်သွယ်လေး တွေ... သူ့ဆံပင် ပျော့ခွေခွေလေးတွေပဲ မဟုတ်လားကွယ်..။
"မောင်တို့တွေ ဘယ်တော့မှ မခွဲကြဘူးနော်.."
ကျွန်မနားအစုံ ကို လက်ဖဝါးနှစ်ဖက်နဲ့ ဖိအုပ်ပြီးခေါင်းကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ရမ်းခါလိုက်ပေမဲ့.. သူတို့ အသံလေးတွေကို ကြားနေ ရဆဲ...။ ကျွန်မကို ငြင်းပယ်ခွင့်ပြုကြပါ..။ ကျွန်မ လက်မခံ ပါရစေနဲ့..။ ဟင့်အင်း.... ကျွန်မ ဘေးနားက ထွက်ခွာ သွားကြပါ..။ အသံလေး တွေရယ်.. ကျွန်မဆီ မလာကြပါနဲ့..။
"ဒီလမ်းဆုံလေးပေါ်မှာ ဖိုးဖိုးဖွားဖွားတွေ ဖြစ်တဲ့အထိ မောင့်... လက်ကိုတွဲရင်း နေ့တိုင်းလျှောက်မှာပေါ့..."
ကျွန်မ မျက်ဝန်းတွေ ကို တင်းနေအောင်ပိတ်ရင်း.. ခေါင်းငုံ့ပြီး ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုအချမှာ- ဆည်းဆာကို အမှောင်တွေက ဝါးမျို လို့...။ ခပ်ရင့်ရင့် နွေလေရူးက ကျွန်မ ရှိုက်သံတွေကို သူနဲ့အတူ ဆွဲခေါ်သွားပြန်တော့ ရော်ရွက်ဝါတွေက လွမ်းချင်းတစ်ပုဒ်ကို ဟစ်အော် သီကျူးရင်း ကခုန်ကြတယ်...။ ဒါတွေအားလုံးဟာ ကောင်းချီးပေးသံလား..!! နှလုံးခုန်သံတွေကို တစိမ့်စိမ့် ရက်ရက်စက်စက် ဆွဲထုတ် ပြစ်လိုက်သံတွေ များလား..!!
အိုးး ဘာဆို ဘာမှ မသိလိုတော့တာပါ..။ ထားခဲ့ကြပါ..။ သွားကြပါ..။ ကျွန်မကို ထားသွားကြ ပါတော့..။ ကျွန်မ တစ်ယောက်တည်း နေနေပါရစေနော်..။ အသံတွေ အားလုံး ဆိတ်ငြိမ်သွားခဲ့ပါပြီ...။ ကျွန်မ ကျေနပ်သွားပါသလား..!! ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မ ဘာမှ မသိလိုက်..။ ဘယ်လို အသံမျိုး မှ မရှိတော့ချိန်ဟာ ကျွန်မရင်အစုံ၊ နားဝတစ်စုံထံကို အကျယ်လောင်ဆုံး အဖြစ်နဲ့ ရောက်ရှိလာလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မ မသိခဲ့ခြင်း ပါပဲ...။ တကယ်တော့... တိတ်ဆိတ်သွားမှုနဲ့ ဒွန်တွဲကပ်ပါလာတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေက အခုမှ အရှိန်အဟုန် ပြင်းပြင်းနဲ့ တရိပ်ရိပ် ထပ်မံ တိုးဝှေ့လို့ လာနေပေါ့...။
ရွက်ဝါကြွေတွေနဲ့ အလှဆင် ခင်းကျင်းဖွဲ့သီထားတဲ့ ဒီလမ်းဆုံမှာ ရစ်ဝဲနေတတ်တဲ့ ဝိဉာဉ်တွေ အကြောင်းကို ဆည်းဆာကတောင် ရိပ်မိနိုင်မယ် မထင်ပါဘူး...။ ပိန်းပိတ်အောင် မှောင်သွားတဲ့ လမ်းပေါ်မှာ- ရွက်ဝါကြွေလေးတွေ တစ်ဖတ်ပြီး တစ်ဖတ်၊ တစ်ထပ်ပြီး တစ်ထပ်ပဲပေါ့..။ ထိုင်သူ မဲ့တဲ့ ခုံတန်းရှည်ပေါ်က ရွက်ဝါလေးတွေက ကြေကြေကွဲကွဲ ဟောင်းနွမ်းလွန်းလှပြီ..။
ဒီလိုပါပဲ.. ကျွန်မရင်ထဲက မဖွဲ့ဖြစ်လိုက်တဲ့ စာလေးတစ်ပုဒ်ကလည်း အစဉ်အမြဲ လတ်ဆတ်ခြင်းတွေနဲ့ ခြောက်သွေ့ ဆွေးမြည့် လို့...။
Posted by Khin Lay Ngel at 4/30/2012 09:07:00 PM2comments:
စာတွေ ရေးခဲ့ဖူးပါတယ် ~ စာတွေ ရေးနေ ပါတယ် ~ စာတွေ ဆက်ရေးပါဦးမယ် ~ ~
ကျွန်မဟာ ကိုယ်တားထားတဲ့ ကိုယ့်စည်း.. ကိုယ်ခတ်ထားတဲ့ ကိုယ့်ဘောင်ထဲမှာ ကိုယ်တိုင် လွတ်လပ်စွာ ကူးရင်းခတ်ရင်း စာရေးနေ သူပါ..။ ခြေအခတ်မှာ ရင်ဘတ်ထဲက အရာတချို့က ဒိုက်တွေအဖြစ် လာကပ် တတ် တာ ဆန်းတယ် မထင်မိ..။ “ဒိုက်” လို့ ဆို တိုင်း အမှိုက်တွေပဲလို့တော့ ပြောလို့ ဘယ်ရမလဲနော်..! တခါ တခါ ဗေဒါဖြစ် သလို ကြာပန်းငုံတွေလည်း လာစုတွယ်ငြိချင် ငြိမှာပေါ့..။ ကျိုးကြောင်း ဆီလျော်သလို ဖွဲ့နွဲ့ရင်း ရာသီ သုံးပါးမှာပွင့်တဲ့ ပန်းတို့ရဲ့ ဝတ်ဆံအကြွေမှာ ငိုက်မြည်းသွားမယ့် အနာဂါတ် ဟာ ဒေသသံ ဆန် မဆန် ဘယ်သူ ငြင်းချက် ထုတ်မှာမို့လဲလေ...!!
စာမှာ ဈာန်ဝင်လာတဲ့အခါ လက်အစုံဟာ မှော်အောင် မအောင် အဖြေ ထုတ်ဖို့ အချိန်ရတတ်တာ မှ မဟုတ်တာ..။ ရေးမိတဲ့ စာမှာ ကာလံဒေသံ ပါချင် ပါမယ်.. နိမိတ်တွေ အတိတ်တွေ နဲ့ ငြိကောင်းငြိမယ်.. ဆန္ဒတွေလည်း ပါကောင်း ပါမှာပေါ့..။ လက်ရှိ ရင်ခုန် သံ နဲ့ နွှယ်ချင်နွှယ်မယ်.. ဒါမှမဟုတ်... ကျိန်စာ မိထားတဲ့ ရင်ဘတ်ထဲက အနာဟောင်း တချို့ ကျိန်စာပြယ် ပြန် ရှင်သန် လာသလိုမျိုး ရုန်းထချင်လည်း ရုန်းထ လာမှာ ပေါ့။
စာဟာ ကျွန်မ မျက်နှာဖြစ်သလို စာဟာ ကျွန်မ ခန္ဓာအသွင် ဆောင်ချင်လည်း ဆောင်ဦးမှာ လေ..။ တခါတရံ တော့ စာဟာကျွန်မ ဆံနွယ်တွေလို ရှုပ်ချင် လည်း ရှုပ်ခဲ့မှာပါပဲ..။ ကျွန်မ သွေးတွေလို ရဲရဲ တောက် လာတဲ့ အခါမျိုးမှာ ကျွန်မကိုယ်တိုင် နည်းနည်းတော့ ကြောက်မိတတ်တာ မငြင်းချင် ပါဘူး...။
သွေးစက်အချို့ နဲ့ ရေးမိတော့မယ့် လက်အစုံကို ဘရိတ် ပြန်အုပ်ရတတ်တဲ့ အခါ ကျွန်မလို သက်ပြင်း ချ မိသူ ဘယ်နှစ်ယောက် ရှိမလဲတော့ မသိ..!! ဝဋ်နာကံနာ တစ်ခုလို အလိုမကျစွာ ကိုယ့်လက် ကိုယ်ပြန်ချုပ်၊ ကိုယ့်လက် ကိုယ်ပြန်ဖြုတ် နဲ့ပါပဲ။ ကျေနပ်သလို မကျေနပ် သလို စိတ်တွေနဲ့ နေရထိုင်ရ ခက်လာတဲ့ အခါ စာအုပ်ကို ပိတ် ပြန်အိပ် ရုံပေါ့..။ ကျွန်မ ခေါင်းတော့ မကုတ်ပါဘူး..။
အိပ်လို့ကော ပျော်မယ် ထင်ပါသလား..!! ဂယောက် ဂယက်တွေ ထတွေးလို့ မာတဲ့ခေါင်းက နေသာ နေဆဲ...။ သံစဉ် ပဲ မဲ့သလို တေးသွား ပဲ လွဲသလိုနဲ့ တောင်ရောက်မြောက်ရောက် ပြန်ရေး ပြန်ဖျက်နဲ့ သမိုင်းအသစ် ကို တက်ဖို့ ခက်ရဲ့။ ဆူးတွေ အများကြီး မြင်နေရ တာတောင် ဖိကိုင်မိ ချင်ပြန်သေးသူ လိုလို ..။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စိတ်ပျက် ကြက်ခြေတွေ ခတ်ရပေါင်းလည်း များလွန်းပြီ..။ စိတ်တွေ အချဉ်ပေါက်တဲ့ အခါ အာရုံ ခါးခါးတွေ နဲ့ ခရီးကို မပေါက်တော့တာရယ်..။
ဒါပေမဲ့လည်း နာတာရှည် ဝေဒနာစွဲသလို လက်အစုံ က စာတွေ ချချ ရေးပြန်တယ်..။ စာရေးသူ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ဟာ မိခင်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ချေ ရာခိုင်နှုန်း ဘယ်လောက်များ ရှိသလဲတော့ မသိ ပါဘူး။ သေချာတာကတော့ စာတွေမှာ ကျွန်မဟာ ဖေဖေဖြစ်သလို နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ မေမေလည်း ဖြစ်တယ်..။ သားလေးဖြစ်သလို ပါးဖောင်းဖောင်း နီတာရဲ သမီးလေးလည်း ဖြစ်တယ်..။ ဆိုးနွဲ့တဲ့ အစ်မ တစ်ယောက် ဖြစ်သလို စကားနည်းတဲ့ ညီမလေးဖြစ်တယ်..။
သိပ်ချစ်တတ်တဲ့ ချစ်သူဖြစ်သလို နားလည်ပေး တတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းလေး ဖြစ်တယ်..။ သက်မဲ့ခုံတန်းလေးဖြစ်သလို ကြောင်ဖြူဖြူလေးဖြစ်တယ်..။ ခေတ်အမြင် ရှိသလို ဟိုးခေတ်ဟောင်းကို ပြန်ဆွဲသူဖြစ်တယ်..။ မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်သလို ပွဲကြည့်သူသက်သက် ဖြစ်တယ်..။ ကျွန်မကို လိုလားသူဖြစ်သလို ကျွန်မကို ခေါင်းခါရှုံ့ချသူ ဖြစ်တတ်ပြန်တယ်..။ အတော်များများ မှာတော့ ပေတေတေဂျစ်ကန်ကန် ခေါင်းမာသူ မိန်းမတစ်ယောက်ပါပဲ..။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မ စာရေးနေပါတယ်..။
ကိုယ်ဆိုတဲ့ တေးသွားတစ်ပုဒ်ကို ကိုယ်တိုင်ပြန်ကြားနိုင်ဖို့ သိပ်ကို ငတ်မွတ်လာတဲ့အခါ နံရံတွေကို ဖောက်ထွက်ရင်း လေစိမ်းတွေနောက် အမောတကော ပြေးလိုက်မိ တတ်တာလည်းရှိတယ်..။ နွေးထွေးမှု ကို လိုအပ် တောင့်တရင်း ရင်ခွင်ငတ်သူလို ဖြစ်လာတဲ့ စာတွေအတွက် ဘယ်ဗေဒင်ဆရာကို ဟောစာတမ်း ထုတ်ခိုင်း ရမယ်မသိ..။ ကိုးရိုးကားရား ကိုယ့်စာတွေနဲ့ ကိုယ် ရယ်ချင်သလို ငိုချင်သလို နဲ့ပေါ့..။ နေတွေခြစ်ခြစ်တောက်ပူ၊ မိုးတွေသည်း၊ လျှပ်တွေလက်၊ လေပြင်းတွေ တဝုန်းဝုန်းကျလို့ နတ်ဝင်သည် နတ်ပူးသလို လည်းဖြစ်ရဲ့...။
စာတွေနဲ့ အတွေးတွေ တမေ့တမော လွှင့်မြောနေခိုက် ရုတ်တရက် မျက်နှာကျက်က အိမ်မြှောင် တစ်ကောင် ပြုတ်ကျလာမှ ကပျာကယာ ထ ဖြစ်တတ်သေးတာမျိုး..။ စာတွေနဲ့ စစ်ခင်းရင်း ပဋိပက္ခတွေ အများသား နဲ့ ကိုယ်တိုင်ပဲ “ကောင်းသောညပါ...” “အိပ်မက်လှလှမက်ပါစေ...” ဆိုတာမျိုး ပြန်ပြီး နှုတ်ဆက် ရလေမလား..!! “လူဆိုတာ ကိုယ့်မာနနဲ့ ကိုယ်” ဆိုတဲ့ စကား အဓိပ္ပါယ်ကို သေချာ နားလည်ပါရဲ့ နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ပဲ စာမှာ “ကိုယ်” နဲ့ “မာန” က အသွင်မတူတဲ့ သတ္တဝါနှစ်ကောင်လို သတ်ကြ ပုတ်ကြ..။
နောက်ဆုံးတော့ ပြန်ဖျန်ဖြေရင်း ကိုယ်တိုင်ပဲ ဒိုင်သူကြီး ဖြစ်သွားရပြန်သေးတာ..။ ဒီလိုနဲ့ လုံးချာပတ်ချာတွေ တဝဲဝဲလည်လို့ပါပဲ..။ စာထဲမှာရွက်လွှင့်... နာကျဉ်ခြင်း ရာသီတွေကိုဖြတ်... ချိုမြိန် ဒုက္ခတွေ ကို ရင်စည်းခံ... အေးစက်စက် အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်တွေကို ကျော်ဖြတ်ရင်း......
စာတွေ ရေးခဲ့ ဖူးပါတယ်.....။
ဒီလိုနဲ့ ပဲ ဟိုး .... နက်ရှိုင်းတဲ့ ရင်ဘတ်ထဲက စကားလုံးတွေ ဝတ်ဆံ ကြွေ တိုင်း ရေးဖြစ်နေ တဲ့ စာရေးခြင်း အနု ပညာ မှာ ရင်ခုန်မှုတွေနဲ့ နူးညံ့သက်ဝင်နေမိပါတယ်..။ စိတ်သန့်စွာနဲ့ ချွေချမိတဲ့ စာတွေအပေါ်မှာ သစ္စာဖောက်မှု ကင်းတဲ့ ရသတစုံတရာလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပေးစွမ်းနိုင်သူ တစ်ယောက်သာ ဖြစ်နေပါရစေ...။
Posted by Khin Lay Ngel at 4/30/2012 06:49:00 PM 1 comment:
ခြေဖျားလေး တွေ ကို ထောက်ပြီး ပထမဦးဆုံး မော့ကြည့် ဖြစ်တာ က ကောင်းကင်..။ တိမ်လွှာ တွေ ရှင်းလင်း ကင်းစင် လို့ ကြည်စင်နေ လွန်း တယ်..။ မျက်ဝန်းတွေရဲ့ ရွေ့လျားရာ က ဝိုင်းစက် နေတဲ့ လ ဆီကို..!! အကြည့် ချင်း အဆုံ မှာ လ ကလှမ်းပြုံးပြတယ်... သူ့အပြုံး မှာ မှင်တက် ရင်း ကိုယ့်အကြည့်တွေ ကလည်း သိပ် ကို ကျေနပ် နေ မလား..!!
ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်စိတ်တွေ ကို ကိုယ်တိုင် အားမလို အားမရ နဲ့..!! ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အားလုံး ကို မိုးထား တဲ့ ကောင်းကင် ကို ကျေးဇူးတင် တယ်.. သူ့ရင်ခွင် မှာ သာခွင့်ပေးထား တဲ့ လ လေး ကိုယ်စား ပါ..။ ကိုယ့်မျက်နှာပေါ်က ဆံပင် တွေ တဝက် တပျက် ဖုံးနေ တဲ့ ပါးပေါ် ကို လရောင် အေးအေးလေး က လာနမ်း တယ်.. နွေည ဟာ သိပ် ကို သာယာ ချိုလဲ့ နေတယ် ဆို တာ ကိုယ့် ကို ပိုသိ စေချင် တာ များလား..!!
လရောင်....!! ဘာလို့ များ အရာရာ ထက် အေးချမ်း နေတာလဲ..!! ဒါဟာ ရှေးစာဆိုတွေပါ မကျန် တစ် ကမ္ဘာ လုံး က လူသား တွေ တညီတညွတ် တည်း အသိအမှတ် ပြု ခဲ့တဲ့ အေးချမ်းမှု.. ထွေပြားနေတဲ့ ကိုယ့် စိတ် အစဉ် ကို ကုစား ပေးဖို့ သူဟာ အသင့် ရှိနေပေးပြန်သလို..။ ခပ် ထွေထွေ ကိုယ့် ရင်အပူတွေ လျော့ဆင်း သွား မလား ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ခြင်းတစ်ခုကို ပွေ့ဖက်လို့ ကိုယ်.. လရောင် စချိုး လိုက်မိတယ်..။
ခေါင်း ကို မော့ထား ရင်း လက်မောင်းတွေပေါ် မှာ အေးတဲ့ အထိအတွေ့နုနု လေးက ကြည်စယ်တော့ အသက် ကို ခပ်ဝဝ ရှုသွင်း ရင်း လက်နှစ်ဖက် ကို ဆန့်တန်း လို့ မျက်လွှာ ကို ပိတ်တယ်...။ ဝတ်ထား မိတဲ့ အဖြူရောင် ညဝတ် အင်္ကျီပွပွ အိအိလေး က ကိုယ့် ကိုယ်ပေါ်မှာ တလူးလူး တလွင့်လွင့် နဲ့..။ အတွေး ထဲမှာ ထင်ကျန်နေ ဆဲ ပုံရိပ်လေး တစ်ချို့က ကိုယ့် နှလုံး ခုန်သံ နဲ့အတူ စည်းချက် ကျကျနဲ့ လိုက် ပြောင်း လို့ပေါ့..။
ဒီလို ညတွေ မှာ မင်းကကော ဂစ်တာလေးတီးရင်း သီချင်းတစ်ပုဒ်ပုဒ်များ ဆိုညည်း နေမလား..!! နှုတ်ခမ်း တစ်စုံ ကို ခပ် တင်းတင်း စေ့ထားရင်း မျက်လုံးအစုံကို မှေးစင်းထားပြီး တစ်နေရာရာကိုများ စိုက်ကြည့် နေမလား..!! ဆံပင်ရှည်တွေ တဝက် တပျက် ကို စုချည်ထားရင်း လက်ထဲမှာ အဖြူရောင် အရည်တွေ ပြည့်နေ တဲ့ ဖန်ခွက် တစ်ခွက်ကိုများ ဆုပ်ကိုင်ထားမလား..!! ဒါမှ မဟုတ် ကိုယ်မဟုတ်တဲ့ မင်း ကောင်မလေး အကြောင်း တွေးနေ လေမလား..!!
လရောင်တွေနဲ့ အေးချမ်းတဲ့ ညတစ်ညရဲ့ သဘာဝ ကို ခံစား ဖို့ မင်း သတိတရရော ရှိနိုင် ပါ့မလား..!! အတိတ် ထဲမှာ တစ်ကြိမ်သာ အကိုက်ခံခဲ့ရဖူးတဲ့ ကဝေ တစ်ကောင် အကြောင်း အရင် ကလို စာရွက်တစ်ရွက်မှာ ကောက်ခြစ်နေမှာလား..!! သဘာဝ ကို ငေးရင်း.. တွေးရင်း.. ခံစားဖွဲ့သီရင်း.. မင်းအကြောင်း တွေးတတ်တာလည်း ကိုယ့်သဘာဝ တစ်ခု ဖြစ်နေခဲ့တာ ကြာပြီ..။ လရောင်ဟာ ကိုယ့်ကို ဖမ်းစားထားလိုက်တာ မှိတ်ထားတဲ့ မျက်လုံးတွေကို ပြန်မဖွင့်ချင် လောက်အောင်ပါပဲ..။
နှာခေါင်းဝ မှာ ရနံ့တစ်ခုကို ပွေ့ဖက်မိတယ်.. စံပယ်ပန်းနံ့..!! မဖြစ်နိုင် ပါဘူး ဒီနေရာမှာ စံပယ်ရုံတွေမှ မရှိတာ.. မဟုတ်သေးဘူး ဒါဟာ မြတ်လေး ပန်းနံ့..! ဟော.. ပြောင်းသွားပြန်ပြီ ပိတောက်နံ့တွေ ထုံအီလာပြီ..!! ကံ့ကော်နံ့တွေ..!! သနပ်ခါးပန်းနံ့..!! အိုး... ကိုယ် ရှိနေတဲ့ နေရာ ဟာ ဒီပန်းတွေ ဒီရနံ့တွေ ရနိုင်တဲ့ နေရာမှ မဟုတ်တာပဲ..။ ကိုယ်ချိုးနေမိတဲ့ လရောင်တွေ ရယ်.. ကိုယ် သိပ်နှစ်သက် တဲ့ ပန်းနံ့တွေ ရယ်.. ထွေပြားနေတဲ့ ကိုယ့် ရင်ခုန်သံတွေ ရယ်နဲ့ ကိုယ်တိုင် ကျေနပ် လာ သလိုလို..။
ထောက်ထား တဲ့ ခြေဖျားလေးတွေကို ပိုမြင့်အောင်ထောက်မိရင်း ဆန့်ထားတဲ့ လက်အစုံကို ပြန်ချ မိတယ်..။ လက်ဖဝါးတစ်စုံမှာ အေးစက် သွားတဲ့ အထိအတွေ့တစ်ခု.. ကိုယ်သိလိုက်တယ်.. ဒါဟာ ဝရမ်တာ လက်ရမ်းဘောင်မှာ ကပ်ထားတဲ့ ကြွေပြားတွေ..။ မှိတ်ထား တဲ့ မျက်လုံးတွေကို တဖြည်းဖြည်း ချင်း အဖွင့် မှာ ဝိုင်းစက်နေတဲ့ လက ကိုယ့်ကိုကြိုနေပြန်ပေါ့.. ဒီတစ်ခေါက်တော့ သူ့ကို အရင်ဦးအောင် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ပြုံးပြ လိုက်မိသူ ဟာ ကိုယ်ဖြစ်သွားတယ်.. ဟက်..!! ဆိုတဲ့ အသံခပ်အက်အက်က မရည်ရွယ် ပဲ ကိုယ့်နှုတ်ခမ်းဝက ထွက်သွားမိသေးလား..!!
ဘာကြောင့်..! ဘာအတွက်..!! ခနဲ့တဲ့တဲ့အသံ ..!!! ခြေချောင်းလေးတွေ ကော့တက် သွားအောင် ဖနောင့်တစ်စုံကို မြှောက်ချလိုက်တာလား..! အလိုလို မြောက်သွား ခဲ့တာလား..!! ကိုယ့်မျက်လုံးတွေကို တင်းနေ အောင် ပိတ်ချလိုက်မိပြီ..။ ကိုယ် ချိုးနေတဲ့ လရောင်တွေက ကျောပြင်နဲ့ ကိုယ့် လက်မောင်းတွေပေါ်မှာ ရေခဲရေတွေလို အေးစက်လို့.. နွေည ရဲ့ အပူချိန်တွေ က ရုတ်တရက် တရှိန်ထိုးနဲ့ကို ကျဆင်းလာတာပဲ..။ ကိုယ့်အင်္ကျီဖြူလေးက ဝရုန်း သုန်းကား နဲ့ ပိုလွင့်လွင့်လို့ လာနေပေါ့..။ လေတွေ က ပြင်းလာလိုက်တာ..! နားထဲမှာ ဂစ်တာသံတွေက မြိုင်ပြီး ပိုပို ညက်ညောလာသလိုပဲ ကိုယ့်နားဝမှာ ချိုမြလိုက်တာ..။
မင်း ပုံရိပ်တွေ က ကိုယ်နဲ့ပိုပိုနီး လာနေ ပါလား..! ပန်းနံ့တွေက ရက်ရက်စက်စက် ထုံအီအောင် မွှေးလာပြန်ပြီ..! စံပယ်တွေ.. မြတ်လေးတွေ.. ပိတောက်တွေ.. ကံ့ကော်တွေ.. သနပ်ခါးပန်းတွေက လေအဟုန်နဲ့အတူ ကိုယ့်မျက်နှာနဲ့ အနီးဆုံးအထိ ပြေးပြေး လာကြ တယ်..။ အစွမ်းကုန်ဖူးပွင့်လို့ လှနေလိုက်ကြတာများ ကိုယ့်မှာတော့ ဆွံ့အလို့..။လရောင် အလင်းတန်းတွေ နဲ့ တောက်ပ လို့ ဘယ်လောက်များ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ နွေညပါလဲ..! လွတ်လပ်ခြင်းတွေကို ပွေ့ဖက် ရင်း ကိုယ့်စိတ်တွေပျော်ပြီး ငြိမ်းချမ်းလို့ပေါ့..။ ကိုယ့် ခန္ဓာကိုယ်လေး က ပေါ့သထက်ပေါ့ ပါး သထက် ပါးလွှာ အေး သထက် အေး လာလိုက်တာ နှင်းပွင့်လေး တစ်ပွင့်လို.. ဝါဂွမ်းလေး တစ်မျှင်လို.. ငှက်သေးသေးလေး တစ်ကောင် လို..!!
ပန်းလေးတွေ က တဖြည်းဖြည်း ကိုယ်နဲ့ ဝေးသွားကြတာများလား..! မွှေးနေတာတွေ လျော့သွားတယ်.. ဟင့်အင်း .. မသွားကြ ပါနဲ့..!! ဘာလို့ ကိုယ့်ကို ထားသွားကြတာလဲ..! ဘယ်သူက ဂစ်တာကြိုးတွေကို ဘာ အတွက် ဖြတ်ပြစ် လိုက်တာလဲ..! ကိုယ်ချိုးနေ တဲ့ လရောင်ဟာ လရောင်မဟုတ်တော့ဘဲ အရောင်စုံတွေ ပြောင်းနေအောင် ဘယ်သူ ဖန်တီးလိုက်တာလဲ..! သဘာဝ မကျ လိုက် တာ.. ဘာအရောင်တွေလဲကွာ..!! အရောင်တွေ အားလုံးက တစ်ရောင်တည်း ဖြစ်သွားကြပြီ..!!
အနီရောင်နုနု.. နုရာကနေ ရင့်လာ တယ်.. နီညိုရောင် ရင့်ရင့်တွေနဲ့ အဆုံးသတ်သွားတယ်..။ အဖြူရောင် ကိုယ့် ညဝတ်ဂါဝန်လေးတောင် အနီရောင်ဖြစ်သွားပြီး စိုလဲ့ လို့လေ..။ ပန်းနံ့တွေလည်း တစ်စက်လေးမှ မကျန်တော့ဘူး..!! ပန်းနံ့တွေအစား ကိုယ့်နှာခေါင်းဝ ကို တိုးဝင်လာတဲ့ အနံ့တစ်ခုက ညှီစို့စို့ နဲ့... ဒါ.. ဘာနံ့ပါလိမ့်..!! ကြည့်စမ်း.. ဒီအနံ့နဲ့ ကိုယ်ဟာ အကျွမ်း တဝင် ရှိနေလိုက်တာ။ လူ့ဘဝထဲကို ကိုယ် စရောက် လာတည်း က ရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့ အနံ့တစ်ခုပဲ... အို..! ကိုယ့်ဘေး မှာ သွေး.. သွေးတွေ... သွေးညှီနံ့တွေ..။
ဘယ်မှာလဲ ကိုယ့်ပန်းပွင့်တွေ ပန်းနံ့တွေ ..!
ဘယ်မှာလဲ ကိုယ်ချစ်တဲ့ ဂစ်တာသံတွေ..!
ဘယ်မှာလဲ ကိုယ့်ရဲ့ မင်း..!
လရောင်ချိုးတဲ့... ည Was Posted On 5:44 AM, Saturday, May 30, 2009
Posted by Khin Lay Ngel at 4/30/2012 06:21:00 PM No comments:
နှင်းဆီတွေ ကို ကျွန်မသိပ်ချစ်တာ အရင်ဦးဆုံး ဝန်ခံပါရစေ။ သူတို့ကိုထိတွေ့တိုင်း ဘယ်လိုဂရုစိုက်စိုက်ပါ.. ကျွန်မ ဆူးစူးတတ် တယ် ထိန်းလို့မရဘူး။ တစ်ခါက အဆိပ်အရမ်းပြင်းတဲ့ နှင်းဆီဖြူတစ်ပွင့်ရဲ့ ဆူးစူး ခံခဲ့ရဖူး တယ်။ ကျွန်မ ညာလက်ညှိုးလေး လေးရက် တိတိ ယောင်သွားခဲ့ပါတယ်.. နာကျဉ်တဲ့ ခံစားမှုနဲ့ အတူ အဲ့ဒီ.. နှင်းဆီ ရဲ့ အဆိပ်ပြင်းခြင်းကို ဘဝမှာပထမဦးဆုံး အကြိမ် အဖြစ် မှတ်မှတ်ရရ မမေ့နိုင်စွာ..။
အံ့သြဖို့ ကောင်းတာ က အဲ့ဒီ.. နှင်းဆီ ကို ကျွန်မအရူးအမူး တွယ်တာသွားခဲ့တယ်။ ခုထက်ထိ ပန်းတွေ ဝယ်ဖို့ ပန်းဆိုင် ရောက် တိုင်း အဲ့ဒီ.... နှင်းဆီကို လက်ကလှမ်းနေမိဆဲ.. ဖွဖွလေး မထိတထိကိုင်ရင်း ပြန်ပြန် ချ ထား ခဲ့မိ တတ်သေးပေါ့။ ပန်းဆိုင်တွေ ကို ရောက်သွားတိုင်း ဘာမှ မဝယ်ခင် အဲ့ဒီ.. နှင်းဆီဆီ ရောက်အောင် သွားလို့ ဒူးထောက်..! ထိတွေ့...! ပြန်ချ...! တစ်ခြားပန်း ကို ဝယ်.. ဒီနေ့ ထိတိုင် သံသရာ လည်နေ ဆဲ..။
ဝယ်လိုက်ရင် ပိုပြီးရင်းရင်းနှီးနှီး “ကိုင်တွယ်ဖြစ်မယ်..” ဒါလည်း သေချာတယ်။ ကိုင်တာနဲ့ ခပ်နက်နက် ဆူးစူး ခံရမှာ အသေအချာ ပဲပါ့။ အစူးခံလိုက် ရမှာကို သိပ်မက်မောနေ မိသူလိုမျိုး ခပ် ကြောင်ကြောင် စိတ်ကူးတွေ နဲ့ ကျွန်မ အမြဲ~~~ ~~~~!! အဲ့ဒီ.... နှင်းဆီက စူးလို့ ထွက်လာမဲ့ အနီရောင် သွေးစတွေ စီးကပ် ခြောက်သွေ့ သွားချိန် အထိ ကျွန်မ ကျေကျေနပ်နပ်နဲ့ ကြည့်လို့ နေချင် မိပြန်သေးတာ... ကြောက်လန့်စိတ် ဆိုတာ တစ်စလေး မှ မရှိတာ အသေအချာ အတိအကျ..။
ဒါပေမဲ့ နှင်းဆီ ကိုတော့ ကျွန်မလုံးဝ မဝယ်ဖြစ် တော့ပါ ဘူး။ အဲ့ဒီ.. နှင်းဆီ” သူ ကျွန်မကို ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ ရသကို ဘဝ မှာ တစ်ခါ ပဲ ရင်ထဲမြတ်နိုးစွာနဲ့ တစ်သက် လုံး နက်နက် ရှိုင်းရှိုင်း သိမ်းထား ချင်မိလို့ ဆိုပါရတော့။
“ဒီလိုနဲ့ အဲ့ဒီ.... နှင်းဆီဟာ ကျွန်မ အတွေးတွေ ကို သေချာထည့်ထုပ်ထားတဲ့ အထုပ် တစ်ထုပ် ကို သူ့ လက်တွေ နဲ့ ကိုယ်တိုင် ဖဲကြိုးတစ်စ ချည်တတ် လာခဲ့ တယ်... တစ်ခါတစ်ခါ ကျွန်မ မသိစိတ်ထဲ အထိ အတင်း ဝင်ပြီး ညှို့တတ်ပြန်သေးရဲ့..။”
သူ အညှို့ခံ ရချိန်တိုင်း လည်း ကျွန်မခြေလှမ်းတွေက ပန်း တစ်ဆိုင် ဆိုင် ကို အလိုလိုကို လှမ်းနေမိရော.. ပန်း ရနံ့ ပေါင်းစုံတဲ့ ဆိုင်မှန် တံခါးကို တွန်းဖွင့်- လှစ်ဟ- ဝင်ရင်း ခြေအစုံက အဲ့ဒီ.. နှင်းဆီ ရှေ့မှာ ရပ်လို့ ခစား..!! အဲ့ဒီ.. နှင်းဆီပေါ့..!!!
“ခပ် တည်တည်နဲ့ သူကိုယ်တိုင်ချည်ထားတဲ့ ဖဲကြိုးကို ဖွဖွဖြည် ရင်း ကျွန်မ အတွေးတွေ ကို ကဗျာတစ်ပုဒ်လို ဖတ်နေတာများ..” ချစ်ဖို့ ကောင်းစွာ ပိုင်စိုးပိုင်နင်းနိုင် လိုက်တာများလေ..။
ကျွန်မ ကိုယ်တိုင် ကကော ဘာထူးလို့လည်း..!! ဖဲကြိုးလေး ပြေကျလို့ သူဖွင့်ထားတဲ့ အထုပ်ထဲကို အတွေး တစ်စ ထပ် ထည့်ပေးခဲ့ တတ်သေး တာပဲ မဟုတ်လား..!! ဒါဟာ ကျွန်မ ချစ်တဲ့ အဲ့ဒီ.. နှင်းဆီဖတ်ဖို့ ကဗျာ တစ်ပုဒ်၊ ဒါမှမဟုတ် စာတစ်မျက်နှာ ထပ်တိုးခြင်းပဲပေါ့..။ ရှိပါစေလေ.. ကျွန်မ ကိုယ်တိုင်က ကျေနပ်ခြင်းတွေ နဲ့ ရင်ဘတ် ထဲမှာ ပြည့်.. သိပ်.. လို့... ရယ်.။။
ဒီမှာ နှင်းဆီ ~
အတွေးတွေ ချုပ်ထားတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ဟာ
မရယ်နဲ့ နှင်းဆီ ~
လှောင်အိမ် ဆိုတဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ်ကို
လက်ထိပ်နဲ့ အခတ်ခံရမှ ခြေတွေ ထူးခတ်ခံရမှ
အိပ်မက် မဟုတ်တဲ့ နှင်းဆီအိပ်မက်က နိုးထပြန်တော့.. ကျွန်မဘေးမှာ ဖဲကြိုးချည်ထားတဲ့ အထုပ် တစ်ထုပ်..!! အထုပ် ထဲမှာ နှင်းဆီ ရနံ့တွေ ထုံအီနေတဲ့ ကျွန်မအတွေးတွေ ရှိနေတယ်။ အဲ့ဒီ.. နှင်းဆီ..!! မင်း တစ်ဝကြီး ဖတ်ဖို့ လှောင်ပိတ်မွန်းကြပ်နေတဲ့ ကြင်နာမှု ငါ့ကဗျာတွေ ရှိနေတယ်။ အို.. ကျွန်မက ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ.. အသက် ရှုမဝခြင်းတွေ ကို အသားကျရင်း ဝအောင် ရှုတတ်ဖို့ကို မေ့နေခဲ့တာတောင် နှစ်တွေချို့လို့ ဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့။
ဒီမှာ ကျွန်မချစ်တဲ့ အဲ့ဒီ.. နှင်းဆီ..!! ငါ့အတွေး ကဗျာတွေနဲ့ မင်း လှောင်အိမ် ထဲက ငါ့ကို တစိမ့်စိမ့် မင်းငေး၊ ခပ်မေ့မေ့ ငါ့အသက်ရှူသံတွေနဲ့ မင်းကျေနပ်၊ လှုပ်လီ လှုပ်လဲ့ ငါ့သွေးစခြောက်တွေ နဲ့ မင်း ကြည်နူး၊။
နှင်းဆီတွေ တစ်ပွင့် နှစ်ပွင့်..!!
ပွင့်ဖတ်လေးတွေ တစ်ဖတ် နှစ်ဖတ်..!!
ကဲ... အဲ့ဒီနှင်းဆီ ကိုယ့် နှင်းဆီရေ မင်း...... ပျော်...... ပါ....... စေ...... ပေါ့...။
Posted by Khin Lay Ngel at 4/30/2012 05:58:00 PM No comments:
ကိုယ့် အတွက် အင်မတိ အင်မတန် ထူးထူးခြားခြားနဲ့ အားအားယားယား ရှိနေတဲ့ နေ့ခင်းလေး ဖြစ်ပါ တယ်..။ တောင်ကြည့် မြောက်ကြည့် ဟိုဝင်၊ ဒီထွက်၊ ထိုင်လိုက်၊ ထလိုက်၊ ကွန်ပြူတာဖွင့်လိုက်၊ ရီစတတ် လိုက်၊ ရေသောက်လိုက်၊ ရေချိုးခန်း ဝင်လိုက်နဲ့ တောင်လုပ်မြောက် လုပ် ဘဝကနေ ပြောင်းလဲကုန်တဲ့ မိုး ခပ်အုံ့အုံ့ နေ့လယ် တစ်ခင်း ဆိုလည်း မမှားပါဘူး..။ ဒီလိုနဲ့ ထိုင်ခြင်း၊ ထခြင်း ဖွင့်ခြင်း၊ ပိတ်ခြင်း တွေ ပတ်လည် ရိုက်ပြီး သကာလ စာရေးမယ် စိတ်ကူးရင်း ကွန်ပြူတာ အဖုံးကိုဖွင့် ဟီတာက အပူချိန်ကို မြှင့်လို့ နေရာ မှာ အပီ မှီကာ အာရုံကိုယူ လိုက်တယ် ဆိုပါတော့...။ ကျွန်မတစ်ခန်းလုံး တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လို့ ကိုယ့်ကို ကိုယ် ဘဝင်တွေခွေ့နေတုန်းပေါ့.... အဲ... ဘာစဖြစ်တယ်ထင်လဲ...!!
ကျွန်မ နေထိုင်ရာ အရပ်ဒေသမှာ အလွန့်အလွန် ရှားပါး လွန်းသော အကောင် တမျိုးက ကျွန်မအခန်းမှာ တဝီဝီ နဲ့ ဟာမိုနီကာတွေ လာကျင့် နေ ပါလေရဲ့..။ ဒီလောက် တံခါးတွေ အထပ်ထပ်ပိတ်ပြီး လုံခြုံမှု ရှိနေ တဲ့ ကိုယ့် အိပ်ခန်းလေး ကို နည်းနည်း တော့ ငြိုငြင် သွား မိတာ အမှန် ပါ..။ ကိုယ်တိုင် လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်နေ ခဲ့တုန်း က သတိ မထားမိ ခဲ့တဲ့ ဒင်းက အသံကုန်မြှင့်လို့ အတက် အကျ အဆွဲ အငင် မှန်မှန် နဲ့ သူ့ဗိုကယ်လ် ထရိန်နင် သူ ဆက်ယူ နေ ဟန် တူ ပါတယ်..။
တင်း ကနဲ ဖြစ်သွား တဲ့ စိတ် နဲ့ ရေးမယ်ကြံထားတဲ့ အနု အရွ လေး တွေ က ကြက်ပျံ ငှက်ပျံ ထွက်ပြေး သွားကြရော ဆိုပါ တော့..။ ဒင်း မျက်လုံးတွေ ကို တည့် တည့်ကြီး ဂြိုလ် ကြည့် ရှိုး ဖို့ လိုက် ရှာတာ နဲ့တင် မသောက် ပါပဲ ခေါင်း တွေ စမူး လာတာပေါ့..။ အဲ့လိုနဲ့ ကျွန်မ ရဲ့ ရှားပါး နေ့လည်လေး ဟာ မျက်မှောင်ကြုတ်ရင်း အသွင် တွေ ပြောင်း လာတယ်..။
ငြိမ်ငြိမ်နေ ဖို့ ကံပါ မလာတဲ့ ခြင်ဆိုတဲ့ သတ္တဝါက ကမ္ဘာဦးအစမှာ ဘယ်လို ပေါ်ပေါက်လာလည်းဆိုတာ ခေါင်းထဲ ရောက် လာရော...။ အသံတွေ သာ ကြားနေရပြီး ထင်ထင်ရှားရှား ကိုယ်ထင်မပြပဲ သရဲ တကောင် နဲ့ တူနေ တဲ့ ဒင်းကြောင့် ဒေါသက ငယ်ထိပ် ရောက်နေ ပြီ...။ ဒီလိုယှဉ်ပြလို့ သရဲကို တွေ့ဖူး သလား မမေး ပါနဲ့ ဘုရားစူး မတွေ့ဖူး ပါဘူး.. ကြုံလည်း မကြုံဖူးတာပါ..။
သူများတွေ ပြောတဲ့ ကြားဖူး နားဝလေး နဲ့ နှိုင်းပြော တဲ့ သဘောလောက်ပါ..။ ထားပါ လေ... ကျွန်မ ကလည်း ကလေး ဘဝက လက်သွက် လွန်း လို့ ကိုယ့် မိသားစု မှာ ခြင်ဖမ်း ချန်ပီယံ ရထား ဖူးသူ မဟုတ်လား..!! လာစမ်း ပါစေ.. ဒီနိုင်ငံ က ခြင် ဆိုတာ ကျွန်မ တို့ မွေးရပ်မြေ က ခြင်တွေ လောက် ခြင် ပီသခွင့် ရပြီး ပါးရည် နားရည် နပ်လို့ ခြင်လည်ကျ တတ်လောက် မယ် မထင် ပါဘူး.။ အို... ဒင်းလောက်တော့ အေးဆေး ပေါ့.. အသေး အဖွဲ ပါ။
ကိုယ့်မာန နဲ့ ကိုယ် စိတ်လေး ကို ဟန်ဆောင် လျှော့ချပြီး ဒီကောင် ကိုယ့်အနား ရောက်အလာ ကို မိန့်မိန့်ကြီး စောင့် နေ လိုက် တယ်..။ အမယ် ကြာကြာ မစောင့် လိုက်ရပါဘူး.. ဘသားချောက ကီးဘုတ်ပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ ညာလက် ဖမိုးနား ကို ပေစောင်းစောင်း နဲ့ ရောက်လာ တယ်။ သူကလည်း အလာသား.. ကိုယ့်လက်ပေါ်မှာ နားပြီး ကိုယ့်သွေး ကို စုပ်ယူ ဖို့ကို မသိမသာ အကဲခတ်ရင်း ဝေ့ကာ ဝိုက်ကာ နဲ့ ပျံပုံပျံနည်း အမျိုးမျိုးနဲ့ ပဲတွေများလို့ ကိုယ်ဟန်တွေ ပြပြီး ကိုယ့်လက် အခြေအနေ ကို လေ့လာနေလိုက်တာ ဘယ်လောက် အသဲယားဖို့ ကောင်းလဲ..။
အူယား လာတဲ့ စိတ်တွေ ကို မျိုချပြီး အသက်ဝဝမရှူပဲ စောင့်နေလိုက်တယ်..။ ဒင်း အသံ တိတ် သွားပြီ...။ ကိုယ့် လက်ပေါ် သူ လာနားပြီ.. ကျွန်မအောင့်ပြီး ဆက်ငြိမ်နေလိုက်တယ်..။ ဒီကောင် ဘာ စိတ်ကူး ပေါက် သွား တယ် မသိ.. သူ့နှုတ်သီးကို ကိုယ့်အရည်ပြားပေါ် စိုက်မချလိုက်ပဲ ရုတ်ကနဲ ထပျံပြေး လို့ ကီးပေါင်းစုံနဲ့ နိမ့်မြင့် တက်ကျ ဗိုကယ်လ် တွေ ထပ်ကျင့်ရင်း ကျွန်မကို ချက်ကင်း တွေ လိုက်နေပြန်ပြီ...။ ထပြီး လိုက်ဖမ်း မယ် မထင်နဲ့နော်.. ထစရာလား..!! ဟွန်း.. ပျင်းတောင် ပျင်းသေး တယ်..။ နင် ငါ့ဆီ ပြန် လာမှာ ငါ သိနေ တာပဲ လို့ စိတ်ထဲ က ပြောရင်း ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ နေလိုက်တာပေါ့..။
အံကို ကြိတ်ပြီး တံတွေးကို အသံမမြည်အောင် မျိုချရင်း.. စိတ်တော့ နည်းနည်းထပ်ရှည်ပေး ရဦးမှာပေါ့..။ ဒီ တစ်ခေါက်တော့ ဒင်း က တိကနဲ အသံကိုဖြတ်လို့ ရုတ်ကနဲ ဘာမပြော ညာမပြော စွေ့ကနဲ လက်ဖမိုး ပေါ် တက်ရပ် လိုက်တယ်.. စက္ကန့်ပိုင်းလေးပါပဲ ဒင်းနှုတ်သီး စအစိုက်မှာပဲ “ဖြန်း” ကနဲ.. အဟက်..!! ဘယ် ရမလဲ တစ်ချက် ဆိုမှ တချက်တည်းပါ.. သွားလေရော့.. သနားဖို့ စိတ်တောင် မကူးလိုက်မိခင်မှာပဲ ဒင်း ခမျာ အတုံးအရုံး ကျဆုံး ရှာပေါ့..။ ခံနိုင်ရိုးလား.. ဒါတောင် ဒီကောင့် ကို ကစ်လိုက်တာ ဘယ်လက် နဲ့နော်.. ။ ကျွန်မ ဘယ်ကျော် မဟုတ်ပါဘူး ညာကျော် သမားပါ..။
အသက်သာကြီးလာပေမယ့် လေ့ကျင့်မှု မရှိတော့ ပါပဲ ကျ မသွားတဲ့ ကိုယ့်လက်ရည်ကို ကိုယ် သဘောတွေတွေ့လို့..။ စိတ်ထဲကတော့ ခုမှ တိတ်တိတ်လေး ကြိတ်ပြီး တောင်းပန် မိသေးတယ်.. ဆောရီးပါ ခြင်လေးရယ် ကိုယ့်ကို ခွင့်လွှတ်ပါ ဘာညာ ဖောဖောပေါ့..။ ရန်တော့အေးသွားပြီ.. စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ ကျွန်မ လက်ထဆေးလိုက်တယ်..။ လက်ဆေး အပြီး Hand Cream မွှေးမွှေးလေးတောင် လိမ်းလိုက်သေး..။ ကဲ... အတွေးနုနု လှလှလေးတွေ နဲ့ စာပြန်ရေးတော့မယ် လုပ်တုန်းပဲ...။
နားမခံသာ လောက်အောင် တဝေါဝေါနဲ့ အသံတွေပေးပြီး မောင်းလာတဲ့ မီးသတ်ကားသံတွေ...။ ဘုရား ဘုရား..!! ကိုယ်တို့ တိုက်ခန်းနား မှာ မီးတွေများ ထလောင်နေ ပလား မသိ...။ ကိုယ် နေတာက ငါးလွှာက တိုက်ခန်း.. ကိုယ့်အိပ်ခန်း က မှန်တံခါးကနေ ထွက်မှ ဝရံတာ..။ ကြောက်စိတ်နဲ့ လန့်ဖြန့်ပြီး စပ်စုဖို့ ဝရံတာ ထွက်ရပ် လိုက်တယ်..။ စိမ့်အေးနေ တဲ့ အော်ရီဂျင်နယ် ရာသီဥတု အေးစက်စက်ကြီး က ကိုယ့်အနွေးထည် ခပ်ပါးပါး ကို မခန့်လေးစားပေါ့..။
ဆူညံနေတဲ့ တဝေါဝေါသံတွေရယ်... ခဏလေးနဲ့ တခိုက်ခိုက်တုန် ချမ်းလာ တဲ့ ခန္ဓာရယ်... ကြောက်စိတ်တွေ ရယ်နဲ့ ဘာလုပ် လို့ လုပ်ရမှန်းမသိ..။ မီးသတ်ကားတွေ ငါးစင်းလောက် ရပ်ထား တာက ကျွန်မတိုက်ခန်းရဲ့ သုံးတိုက်ကျော်လောက်မှာ... ရဲကားတွေလည်း ထပ်ရောက် လာပြန်ပြီ...။ ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ.. အိပ်ခန်းထဲ ပြန်ဝင်ပြီး အနွေးထည် ထူထူဝတ် ပြန်ထွက် .. ကြာကြာ ရပ်ကြည့် နိုင်ဖို့ ကလည်း ထပ်မဝတ် လို့ မရ...။
တစ်ယောက်ထည်း ကြောက်လည်းကြောက် ချမ်းကလည်း ချမ်းနဲ့ အလုပ်တွေရှုပ် စိတ်တွေရှုပ် နားတွေက အူပေါ့..။ ခဏနေတော့ ရဲကား လော်စပီကက စကားပြောသံတွေ ထွက်လာတယ်..။ ဝေဝေဝါးဝါးမို့ သေချာနားကို စွင့်ပြီး နားထောင်မှ တောင်းပန်သံ တွေပါ..။ လူတစ်ယောက်ကို နားချနေတဲ့ အသံတွေပါပဲ..။ ကျွန်မ တိုက်ခန်း ရဲ့ သုံးတိုက်ကျော်တိုက် က ရှစ်ထပ်လောက် ပဲ မြင့်တဲ့ တိုက်ပါ..။ အော်ပြောနေတဲ့ ရဲတွေ မော့ကြည့် နေတာ ကလည်း အဲ့ဒီတိုက်ရဲ့ ခေါင်မိုးပေါ်ကို..။ သေချာပါပြီ နေရင်းထိုင်ရင်း တယောက်ယောက် က ခုန်ချဖို့ ကြိုးစားနေပြီ ဆိုတာ..။
ဒါဆို မီးသတ်ကားတွေ ကကော.. ဘာလို့...!! စဉ်းစား နေရင်း သတိရ သွားတာ က ဖုန်းဆက်ဖို့ ကိုပါ..။ အခင်းဖြစ်နေတဲ့တိုက်ရဲ့ ရှေ့တိုက်မှာ ကျွန်မ သူငယ်ချင်း လင်မယား နေတာ မေ့နေလိုက်တာ..။ ကျွန်မ သူငယ်ချင်းရဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းကို ခေါ်လိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ ဆူညံသံတွေနဲ့ အော်ပြောနေတဲ့ သူ့အသံက ရဲကားတွေနားက လမ်းပေါ် ကပဲ ဆိုတာ မှန်းလိုက် မိပြီးသား..။
သူက ကိုယ်ဝန်ကြီး နဲ့ရယ်.. ဒါတောင် မြန်လိုက်တာ လမ်းမပေါ် တောင်ရောက်နေပြီ..။ ဖုန်းထဲက ကိုယ့် အသံတွေ ကြားနိုင် ဖို့တောင် သူ့မှာအနိုင်နိုင်ဖြစ်မယ်..။ ခပ်လှမ်းလှမ်းကို လျှောက်လိုက်ဖို့ ကျွန်မ အော်ပြော မှ “အေး... ခဏစောင့်” တဲ့... သူ့အသံ ကတော့ သိပ်ကြောက်လန့် နေဟန်မရှိဘူး.. ခပ်အေးအေး ပါပဲ..။ ဘာဖြစ်တာလဲ ဆိုတာ သူငယ်ချင်းဆီမှာ စနည်းနာ လိုက်တော့မှ... သက်ပြင်းကော သက်မ ပါချပြီး အဲဒီ လူကို စိတ်ထဲကနေ ကျိန်ဆဲချင်ချင် ဖြစ်သွားတာ ကျွန်မ မညာပါဘူး..။ နောက်ဆုံး ကောက်ချက်ချ မိတဲ့ အကျဉ်းချုံးကတော့ အမူးသမားတစ်ယောက် အရက်မူးပြီး တိုက်ခေါင်မိုးပေါ် တက် ပါသည်..။ အရက် ပုလင်းကိုင်ကာ သောက်ရင်း သူ့အိမ်မှာရှိတဲ့ ခြုံစောင်တွေ ယူသွားပြီး တိုက်ခေါင်မိုး ပေါ်ထိုင် ကာ စိမ်ပြေနပြေ မီးရှို့ ပါသည်...။
လက်ကိုင်ဖုန်း ကို ကိုယ်တိုင် ယူသွားကာ မီးလောင်နေပြီဟု မီးသတ် ဌာန ကို ဖုန်းဆက်ခေါ်ပါသည်..။ မီးသတ်ကား များ ရောက်လာသော် မူးမူးနှင့် ခုန်ချမည် ဟု ကြိမ်းပါသည်..။ ရဲများ ပြာယာ ခတ်နေသည် ကို အပေါ်မှ ငုံ့ကြည့်ရင်း အော် ရယ်သေး သည်..။ တကယ်တမ်းတော့ ထိုလူ ဟန်ရေးပြ ရုံသာ ခုန်မချခဲ့ပါ.။ ဂလို ဂလိုပင် ဖြစ်လေ၏..။ တိုက်ခေါင်မိုး ပေါ် အထိ လိုက်တက်သွားကြတဲ့ မီးသတ်များ နဲ့ ရဲအချို့ စိတ်ထဲမှာတော့ ဘယ်လိုရှိနေမယ် မသိ..။ ဖြစ်ကြောင်း ကုန်စင် ကြား ရတဲ့ ကျွန်မ ကျိမ် ဆဲချင်စိတ် ပေါက်တာတောင် အတော်လေး နုနေ ဦးမှာ..။ ခက်လိုက်တဲ့ လူတွေပါလားနော်..။
ဘယ်လို အတွေးတွေ ပါလိမ့်..!! မူးသာ မူးတာ အဖမ်းခံရပြီး နံမည် က ကျော်ချင်သေး ပါတကား..။ သူငယ်ချင်း လည်း သူ့ တိုက်ပေါ် ပြန်တက်သွားပြီ...။ အေးစက်နေ တဲ့ ကိုယ့် လက်ဖျားလေးတွေ ကိုတောင် ခုမှ သနား ရကောင်းမှန်း သတိရကာ ကျွန်မ လည်း စိတ်တိုတိုနဲ့ အခန်း ထဲ ပြန်ဝင်ခဲ့ပါတယ်..။ မိုးကအေးအေး.. ရာသီကချမ်းချမ်း တုန်.. ခြင်ကတမျိုး.. အမူးသမားက တဖုံ.. သူတို့ကြောင့် ကျွန်မ ရဲ့ ရှားပါး နေ့လယ်ခင်းလေး လည်း ပျက်သုန်းလို့..။
အကြင်နာတွေနဲ့ အသာ အယာ ရေးမဲ့ စာသား အနုအရွလေး တွေလည်း အသံပေါင်းစုံနဲ့ အတူ ကိုယ့်ကို ဘိုင့် ဘိုင်းး သွားကြ ပြီ..။ နေ့အချိန်တွေ ကုန်လွန်လို့ ညနေခင်းလည်းရောက်ခဲ့ပေါ့...။ ဖြစ်ကြောင်းရယ် ကုန်စင်ပြီးသကာလ တင်းနေ တဲ့ ကိုယ့်မျက်နှာကြော ကိုယ်ပြန်လျှော့... ရေတစ်ခွက် ကို မော့သောက်.. ဆာနေတဲ့ ဗိုက်ကိုဖြည့်ဖို့ လျစ်လျူ ရှု.. ကွန်ပြူတာ ကို ရှပ်ဒေါင်း... ကုတင်ပေါ် တက်.. စောင်ကိုခေါင်းမြီးခြုံ... နားနှစ်ဖက်ကိုပိတ်... အိပ်စက်ခြင်း သည်သာ အကောင်းဆုံးဖြစ်တော့မည်..။ ဒါတောင် ကိုယ်တိုင် အပြစ် တင်ချင်နေမိ သလိုလို သနားနေမိ သလိုလိုတွေက ဖြစ်မိနေသေး...။
အေးအေးလူလူ နဲ့ စာရေးဖို့ ဘာညာ မတွေးတောပဲ အစ ကတည်းက ဘာမီတွန်လေး သောက် စောင်ထူထူလေး ခြုံပြီး ဇိမ်လေး နဲ့ အိပ်ခဲ့ မိရင် အကောင်းသား...။ အို... တော်ပါလေ ခုမှ နောင်တ ရနေလည်း အပို ပဲပေါ့..။ ဒီတော့ ဖြစ်သမျှအကြောင်း အကောင်းရယ်လို့ မှတ်ယူ ရင်း မျက်လုံး ကို စုံမှိတ် အိပ်ကာ နားအေး ပါးအေး အိပ်မက် ချိုအေးမွှေးလေး မက်လို့ လှပစေဖို့ ဆုတောင်းရုံ သာ ရှိလေတော့၏..........။
ဒီစာလေး ကို အားနေခဲ့တဲ့ Monday, April 19, 2010 နေ့တုန်းက ရေး ခဲ့တာ ပါ။ ခုလည်း အဲ့ဒီနေ့လေးလိုဘဲ အားနေလို့ ပြန် share လိုက်ပါတယ် ..။ ပျင်းနေလို့ အပျော်လေး ပါ...။း)
Posted by Khin Lay Ngel at 4/30/2012 04:49:00 PM No comments:
အောက်တိုဘာလ တစ်ဆယ့်လေးရက်။ ရာသီဟာ သူ့သဘာဝ အတိုင်း သိပ်ကို မျှတ သင့်တော် လှပနေ ခဲ့ပါတယ်။ သောကြာနေ့ ပါ။ မျက်ဝန်းတွေ ထဲမှာ အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ မြစ်တစ်စင်း သတ္တိရှိရှိ စီးဆင်းနေခဲ့တဲ့ နေ့ဖြစ်တယ် ဆိုပါတော့။
မျက်စံနက်တွေဆီမှာ မြစ်ဖျားခံတဲ့ ရေအဟုန်ကို စုန်ကာမျှောရင်း သူမလုံးသားရဲ့ နက်ရှိုင်းတဲ့နေရာ တစ်ခုအထိ သူဟာ အရိုးသား ဆုံး အရောက်သွားနိုင်ခဲ့တဲ့ နေ့လည်းဖြစ်ပြန်တယ်။ သူမစိတ်တွေဆီ အလိုက်သင့်လေး စီးမျောဖို့ သူ့ကို ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ နေ့ဆို လည်း မမှားပါဘူး။
မုသားကင်းတယ်။ လှည့်ဖျားမှုမဲ့တယ်။ ကောက်ကျစ်ခြင်း ရှင်းတယ်။ သိနေခဲ့ပြီးသား အရာတွေကိုပဲ ဖလှယ်ခဲ့တာမျိုး။ ပူလောင် စူးရှ တဲ့နေ သာမနေခဲ့ပါဘူး။ လေ ပြေတယ်။ တိမ်တိုက်တွေ မထူထပ်ခဲ့ဘူး။ အေးချမ်းတယ်။ ခေါင်းတစ်ချက် အညိတ်မှာ ကြားရ ခဲတဲ့ စကားလုံးတစ်ချို့ကို သူက သွန်ချ။ သူမဟာ ကြည်နူးမှု စားသုံးသူ သက်သက် မဟုတ်ခဲ့တာ အသေချာပါ။ တရား မျှတ ခဲ့ပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း ကျေနပ်ခြင်း ကောင်းကင်အောက်မှာ နှစ်လိုဖွယ် သက်ငြိမ်လေးအဖြစ်နဲ့။
မေးခွန်း တစ်ခု အဖြစ် ဘယ်လိုအချိန်မျိုးတုန်းက သူမေးခဲ့ဖူးတာလဲ..!! မေးခဲ့ဖူးပါသလား..!! သူမ သေချာမသိ။ သူမကတော့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဖြေလိုက်ရဲ့။
”စကြာဝဠာကြီးဟာ ကိုယ့်ကို ဗဟိုပြုပြီး လည်ပတ်နေသလိုပဲ” လို့ သူပြန်ပြောခဲ့တာ သေချာပါတယ်။
သူမ ကို သူမြင်သွားပြီ။ သူ့ကိုယ်သူလည်း သူမြင်သွားပြီ။ နှလုံးသားရဲ့ ပစ္စုပ္ပန်ကို သူမနဲ့ သူ တည့်တည့် ကြည့်မြင်လိုက်ကြပြီပဲ။ စိတ် ကို စိတ်ချင်းယှက်~ စိတ်တွေနဲ့ စိတ်တစ်ခုဆီ စီးမျော~ အို..!! အရာရာဟာ ခမ်းနား ထည်ဝါလိုက်တာ~ လှပလိုက်တာ~ နူးညံ့ သိမ်မွေ့ လိုက်တာ~ အိနြေ္ဒရှိလိုက်တာ~ ကြည်စင် ရှင်းသန့်လိုက်တာ~ အနုပညာဆန်လိုက်တာ~
“ဒါဟာ ယာဉ်ပဲ.. ပန်းတိုင်တော့ မဟုတ်ဘူး၊ ခရီးစဉ်ပဲ.. ခရီးဆုံးတော့မဟုတ်ဘူး”
“ကိုယ့်စိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့ အနက်ရှိုင်းဆုံးကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး အရှိအမှန်အတိုင်း ရှင်သန်နေထိုင်ရတဲ့ဘဝဟာ ရှားပါးလွန်းပါတယ်”
သူ့ကို သူမက “သက်ငြိမ်” လို့ တိတ်တိတ်ကလေး အမည်နာမ ပေးထားခဲ့သူ။ ခုတော့ သူ့စကားတွေ နားနဲ့ အကြားမှာ သူမဟာ “တေမိ”ပေါ့။ သူမနှုတ်ခမ်းဖျားဆီကို သူ့အကြည့် ရွှေ့လိုက်သလားမသိ။ သူဟာ သူမအပြုံးတွေ ကူးစက်ခံ လူသားဖြစ် သွားပုံ ရတယ်။ ပြုံးနေမှန်း မသိသာပါဘူး။ သူပြုံးနေတယ်။ ဒါကို သူမက သိနေတယ်။ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း သတိထားပြီး သိနေပါတယ်။ စကားသံတွေ တိကနဲ ရပ်သွားခဲ့ပေါ့။
ခံစားမှု ကို မီအောင် ထုတ်ဖော်နိုင်ဖို့ ဦးနှောက်ကို ခပ်ဆိတ်ဆိတ် အမိန့်ပေးနေချိန်မှာ သူကလည်း အကျစ်လျစ်ဆုံး စကားလုံးတွေ ကို တည်ငြိမ်စွာနဲ့ ရွေးချယ်နေခဲ့တယ်ဆိုတာ သူမသိနေခဲ့တာပါ။ သူမက စကားရှာသူ။ သူက စကားရွေးသူ။ ငြိမ်သက်နေခဲ့ကြ ချိန်လေးဟာ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လေး ပကတိ နူးညံ့လို့ပါပဲ။ လက်ဖျားလေးတွေဆီကနေ ဆံခြည်မျှင်လေးတွေအဆုံး ရင် တလှပ်လှပ် ခုန်နေရခြင်းဟာ ပန်းလေးတစ်ပွင့်ထက် လှပလွန်းပြန်နေပေါ့ကွယ်။
သူမ မျက်လွှာချလိုက်တယ်။ သူက အသက်ကို ခပ်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်ရှိုက်ပြီး ပြေလျော့လျော့ ထိုင်နေတဲ့ ခန္ဓာကို မတ်လိုက်ပါတယ်။ ချထား တဲ့ မျက်လွှာကို ပြန်ဖြေရင်း မော့ကြည့်မိချိန်မှာ သူဟာ ကဗျာတစ်ပုဒ် ဖြစ်နေခဲ့ရဲ့။ ပန်းချီတစ်ချပ် ဖြစ်နေခဲ့ရဲ့။ တစ်စုံ တစ်ရာပြော ဖို့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေ မသိမသာ တုန်ရီသွားခဲ့တာပါ။
“စကားလုံးတွေ ရဲ့ ဟိုမှာဘက်ထိ ရောက်သွားပြီ စိတ်နဲ့တောင် စိတ်ကို ပြန်မသိနိုင်တော့ဘူး”
သူမ အပြုံးတွေ ဟာ မိန်းမငယ်လေးတစ်ယောက်လို ရှက်စနိုး အရိပ်ယောင်လေး ဖြတ်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ သူကတော့ တည်ငြိမ်ခြင်း သက်ငြိမ်။ သူ့စိတ်တွေလည်း သူမနဲ့ ထပ်တူထပ်မျှ လှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတာ နှစ်ဦးလုံး ငြင်းဆိုနိုင်မှာမှ မဟုတ်ပဲနော်။ မျက်လုံး နဲ့တော့ မမြင်ရဘူး။ မမြင်နိုင်ဘူး။ စိတ်တွေနဲ့ပဲ မြင်ခဲ့ရတာမျိုးပါ။ ဖောက်ထုတ်ရှု့မြင်နိုင်စွမ်း မြင့်မားလွန်းတဲ့ သူမ စိတ်တွေ ကို ကိုယ်တိုင် ကျေနပ်လိုက်ရတာလေ။ သူ့ကိုလည်း လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်တယ် ဆိုတာကို အသေအချာ သိနေတဲ့ သက်ငြိမ်လေး ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်းကင်ကြီး တစ်ခုလုံး လဲ့ဖြာလို့ပါ။ ခပ်အေးအေး လေညှင်းလေးတွေက သူမတို့ကို အနွေးထွေးဆုံး လွှမ်းခြုံဖို့ အရောက် လာခဲ့ကြပေါ့..။ နူးညံ့လွန်းတဲ့ စိတ်ဝိညာဉ်လေးနှစ်ခုက လေညှင်းတွေကို တွဲခိုစီးရင်း လဲ့ဖြာနေတဲ့ ကောင်းကင်ယံမှာ ကြည်နူးခြင်းတွေ နဲ့...။
Posted by Khin Lay Ngel at 4/30/2012 01:39:00 PM No comments:
မင်းပေးတဲ့ ရသတွေဟာ သိပ်ကို စုံလွန်းလှတယ်။ ဘယ်တော့မှလည်း ရိုးနိုင်မယ်မထင်ဘူး။ အများဆုံးရတတ်တဲ့ ရသကတော့ ကိုယ့်ကို မင်းဟာ စိုးရိမ်မှုတွေ ပေးတတ်ခြင်းပါပဲ...!! မင်းကပဲဆိုးတာလား ကိုယ်ကပဲ စိုးရိမ်လွန်နေတာလား.. တစ်ကယ်တော့ ကိုယ်ဟာ မင်းအတွက်သက်သက်နဲ့ အသက်ရှင်နေတဲ့ လူသားတစ်ယောက်ရယ်ပါ။
အဲ့ဒီနေ့က မိုးတွေရွာနေခဲ့တယ်လေ... မိုးရေတွေထဲမှာ ထီးမပါပဲ ခေါင်းတစ်ခါခါနဲ့ လမ်းလျှောက်နေတဲ့မင်းကို ခပ်ဝေးဝေးက လှမ်းအတွေ့မှာ အမြန်ဆုံးနှုန်းနဲ့ မင်းနားကို ကိုယ်ရောက်သွားခဲ့တယ်။ ကိုယ့်အပြောမှာ ပေတေတေ အကြည့်နဲ့ မင်းပြောခဲ့တဲ့စကားက...
“အိုး...!! ပူစရာမလိုပါဘူး.. ငါက လူမမာကြီးမို့လား.. ဒီမိုးလေးလောက်များ....”
ကားပေါ်ကနေ ခဏလေးဆင်းမိတဲ့ ကိုယ့်ခန္ဓာကို မိုးစက်တွေ လာထိရုံနဲ့တင် ကိုယ့်မှာတော့ ခိုက်ခိုက်ကို တုန်လို့.. အေးလွန်းသလို ဆိုးဝါးလွန်းတဲ့ ရာသီဥတုမှာ ပေတေလွန်းတဲ့ မင်းကိုကြည့်ရင်း ငုတ်တုတ်မေ့ခဲ့ရတဲ့ နေ့တွေထဲက တစ်နေ့ပေါ့...။
စိတ်ကူးပေါက်ပေါက်နဲ့ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ခဲ့ကြတဲ့ နေ့လေးအပြန်ကိုလေ... ကောက်ခါငင်ကာနဲ့ မင်းပြောခဲ့တဲ့စကားက...
“မနက်ဖြန်လည်း ငါ.. ကျောင်းမသွားဘူး ဒီကား ထပ်လာကြည့်ဦးမှာ..”
ကိုယ့်အကြည့် ကြောင်အမ်းအမ်းမှာ ဟက်ဟက်ပက်ပက် မင်းပြုံးတယ်..။
“ဟ.. ကျောင်းပျက်လို့ စာမရတဲ့ အထဲမှာ ငါမပါဘူး....”
မင်းကိုယ်တိုင် ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ပြောနေတဲ့ မင်းစကားမှာပဲ ကိုယ်ဟာ ပါးစပ်အဟောင်းသား...။
ဖုန်းဆက်ပြီး ကိုယ့်ကိုခေါ်ခဲ့တဲ့ ပူပြင်းလွန်းတဲ့ နေ့တစ်နေ့ကိုပေါ့...။ နေပူကျဲကျဲမှာ တိုက်နေတဲ့ လေရဲ့ အပူချိန်နဲ့တင် အသားတွေဟာ ကျွမ်းမတတ်။ ကိုယ်ရှိနေတဲ့ နေရာကို မင်းမေးတယ်.. ပြီးတော့....
“မိနစ်သုံးဆယ်အတွင်း လာခေါ်ပေးပါ... ငါ ..x..x..x. ပန်းခြံရဲ့ ဘယ်ဘက်အခြမ်းမှာ ရှိနေတယ်...”
ကိုယ်ရောက်တော့ သိပ်ကြာကြာမရှာရဘူး ပူလွန်းလို့ ဘယ်သူမှ မထိုင်နိုင်တဲ့နေရာမှာ မင်းကိုအထင်းသားတွေ့ လိုက်ရတယ်။
“ထ မယ်လုပ်မှ မိုက်ကနဲဖြစ်သွားလို့...”
ပြူးထွက်နေတဲ့ ကိုယ့်မျက်လုံးတွေကို ခပ်ငဲ့ငဲ့ကြည့်ရင်း...
“မည်းချင်လို့ နေကင်တယ်.. ဘယ်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်ဖူး ငါ့အသားနဲ့ငါ... နင် လာခေါ်ပေး တာ ကျေးဇူး..”
ထ အရပ်မှာ ယိုင်သွားတဲ့ မင်းလက်မောင်းကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဖမ်းအထိန်း.. မဖြူတဲ့ ကိုယ့် လက်ဖမိုးက နေလောင်ခံထားတဲ့ မင်း လက်မောင်းပေါ်မှာ ဖွေးဖွေးကိုဆွတ်လို့...။ ကိုယ့်မျက်နှာ ဟာ မင်းကြောင့် မျက်မှောင်တွေ ကြုတ်ထားမိတာ အတော်ရုပ်ဆိုးနေခဲ့မှာ.. ။
တစ်ရက် မထင်မှတ်ပဲ ကိုယ်မင်းအိမ်ကို ရုတ်တရက်ရောက်ခဲ့တဲ့နေ့လေ... လေးချက်လောက် ဆင့်ပြီးတီးမိတဲ့ ဘဲလ်သံအဆုံးမှာ မင်းတံခါးလာဖွင့်ခဲ့တယ်.. မင်းမျက်နှာကို မြင်လိုက်ရချိန် အံ့အားသင့်မှုတွေနဲ့ ကိုယ့်မှာ ဆွံ့... အ... လို့...!! မင်းကတော့ ရှက်ရွံ့ သွားခြင်း အလျင်းမရှိ... ပကတိ အေးစက်စက် ငြိမ်းချမ်းစွာ ခပ်တည်တည်နဲ့ပေါ့။
“အိမ်ထဲမှာနေလို့ အလှမပြင်ရဖူးလို့ ဘယ်ဘုရားမှ ဟောမထားဘူး.. ရဲနေအောင် နှုတ်ခမ်းနီဆိုးတော့ကော ဘာဖြစ်လဲ...”
“ငါ့အာရုံနဲ့ငါ.. နင်လန့်စရာမလိုဘူး.... အလှပြင်တာ မြင်ဖူးအောင်ကြည့်ထား ဟွန်း..”
အံ့သြမှုတွေနဲ့ တဟား ဟား ကိုယ် အော်ရယ်တော့လည်း မင်းက မင်းနဲ့ မဆိုင်သလို ထုံးစံအတိုင်း အေးဆေးနဲ့ပါပဲ...။
မင်းနဲ့ ကိုယ် ဗုံတီးသံတွေ ဆူညံနေတတ်တဲ့ လမ်းလေးခွဆုံ အကျယ်ကြီးမှာ လမ်းကူးတုန်းကလေ... လက်ရဲဇက်ရဲနဲ့ ကိုယ့်လက်ကို ဆောင့်ဆွဲပြီး...
“လာဟာ.. ဟိုဖက်ရောက်တဲ့အထိ ဖြတ်ပြေးကြမယ်..”
အလန့်တကြား ပြေးပြီးလိုက်မိတဲ့ ကိုယ့်ခြေထောက်တွေကပဲ တွန့်ဆုတ်ဆုတ် နိုင်နေလို့လားမသိ.. ကိုယ့်လက်ကို ဖြုတ်ချရင်း...
“ဘာလဲ.. လူတွေကြည့်လို့ ရှက်တာလား.. သူများပစ္စည်းခိုးတာ မဟုတ်ဘူး.. ပြေးချင်စိတ်ရှိလာလို့ ပြေးမိတယ်.. မှားလား..! လူတွေရဲ့အကြည့်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘောင်မခတ်စမ်းပါနဲ့...”
သက်ပြင်းချမိတဲ့ ကိုယ်ဟာ.. မင်းရဲ့ စူးရှရှ မျက်စောင်းမှာ တမေ့တမော မှင်တက်လို့။
မင်းသူငယ်ချင်း သုံးယောက်နဲ့ ကိုယ်တို့ လျှောက်လည်ဖြစ်တဲ့နေ့ပေါ့... လမ်းဘေးက ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ထိုင်နေတဲ့ ကိုယ့်မိတ်ဆွေတစ်ဦး ကိုယ်တို့တွေကို တွေ့သွားခဲ့တယ်နော်.။ သူက ဟန်လုပ်ပြီး မုန့်လေးဝင်စားသွာပါဦး ဆိုတဲ့ အပြောကို... အိနြေ္ဒထိန်းဖို့ ကိုယ့်လက်အကုတ်မှာ မင်းပြန်ပြောတဲ့စကားက...
“ကျွေးတဲ့လူက ကျွေးချင်တယ်.. ငါက ဆာလို့ စားချင်တယ်ပြော ခေါင်းညိတ်တာ ဘာဖြစ်လဲ.. ဒါ.. ဟန်ဆောင်စရာလား.. သွားစမ်းပါ...ငစိုးရာ”
ကိုယ့်မိတ်ဆွေ ဆွဲထုတ်ပေးတဲ့ ခုံမှာ မင်းက.. ကျကျနန ဝင်ထိုင်ရင်း ကိုယ့်ကို လှမ်းပြုံးပြခဲ့တာနော်.. ကိုယ့်မှာသာ မအီမလည်ကြီးနဲ့ မင်းဘေးမှာ ဝင်ထိုင်လိုက်ရရော...။
မင်းဖေဖေဆိုခဲ့ဖူးတဲ့ Cliff Richard သီချင်းတစ်ပုဒ်အကြား ရှိုက်ကြီးတငင်နဲ့ မင်းငိုခဲ့တဲ့နေ့လေ... လမ်းပေါ်မှာ လူတွေကအများကြီး ခေါင်းလည်းမငုံ့ဘဲ တအိအိနဲ့ ငိုရင်းလျှောက်နေတဲ့ မင်းပုံစံကို ပြန်မြင်လာတယ်.. သတိထားဦး.. ဆိုတဲ့ ကိုယ့်အပြောကို...
“ဟင်.. လမ်းပေါ်မှာငိုတာ အခွန်ဆောင်ရလို့လား... မလိုအပ်တဲ့ နားချမှုတွေ လာမလုပ်နဲ့ ဒါ.. ငါ့လွတ်လပ်ခွင့်..”
ကော်ဖီတစ်ခွက်ကို ကိုင်ထားပြီး ကော်ဖီဆိုင် တစ်ဆိုင်မှာ တစ်ယောက်ထဲ ထိုင်နေတာကို မထင်မှတ်ဘဲ ကိုယ် တွေ့သွားခဲ့တဲ့ နေ့လေးကိုရော...!! မင်းဟာ ဘယ်အရာကိုမှ လွန်လွန်ကျူးကျူး မလုပ်တတ်တာ ကိုယ်ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မင်းနဲ့ ကော်ဖီက လုံးဝ မတည့်ဘူးလေ။ တစ်နေကုန် မင်းထိုင်နေခဲ့တာ ကိုယ်သိနေတယ်.. ပူတတ်လွန်းတဲ့ ကိုယ့်စိတ်တွေကတော့ ငယ်ထိတ်တောင်ရောက်နေပြီ။ ပြန်ဖို့ပြောတဲ့ ကိုယ့်စကားကို...
“အများကြီး မသောက်သင့်တာ ငါသိတယ်.. ငါ့. အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်တဲ့ စကားတွေ လာမပြောနဲ့နော်...”
ကိုယ့်ကို မင်းက ခေါင်းကိုမော့ပြီး ပြောတာမျိုး မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ မျက်ဝန်းတစ်စုံကို ထောင့်ကိုကပ်လို့ အပေါ်ကို လှန်ပြီး ဂျစ်တူးတူး မျက်နှာပေးနဲ့ ပြောပြောဆိုဆို ထ ရပ်ခဲ့တာလေ။ မင်းလွယ်နေကျ အိတ်လေးကို ဖြတ်ကနဲ လွယ်ရင်း ခပ်ကျော့ကျော့ ခြေလှမ်းတွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုကျောခိုင်း၊ ကားသော့လေးကို လက်ညှိုးနဲ့ ကစားရင်း.. တစ်လှမ်းချင်း.. ထွက်သွားလေရဲ့....!! ကိုယ့်မှာသာ သက်ပြင်းတွေ တစ်သီကြီးနဲ့...မင်းချန်ခဲ့တဲ့နေရာမှာ ငေါင်ပြီး ကျန်ခဲ့ရရော... မိဆိုးရယ်..!!
“..... ..... ..... ..... ..... .... .ဟွန်း..... ..... ..... ..... ..... .....” တဲ့....။
“..... ..... ..... ..... ..... .....ငစိုးရယ်.... ..... ..... ..... ..... .....” တဲ့....။
“..... ..... ..... ..... ..... ...နင် ဟာလေ... ..... ..... ..... ..... ....” တဲ့....။
“..... ..... ..... ..... ..... ...တော်စမ်းပါ... ..... ..... ..... ..... ....” တဲ့....။
“..... ..... ..... ..... ...ရော့.. ဒါ.. နင့်အတွက်... ..... ..... ..... ....” တဲ့....။
တစ်ကယ်တော့ ကိုယ့်နာမည် တစ်လုံးကိုယူပြီး မင်းကိုယ့်ကို “ငစိုး..” လို့ မခေါ်သင့်ဘူးသိလား..!! ကိုယ့်ရင်ထဲက တိတ်တိတ်လေး ခေါ်နေမိတဲ့... မင်းနာမည်မဟုတ်တဲ့.. “မိဆိုး..” ဆိုတာသာ မင်းနာမည် အရင်းဖြစ်သင့်တာပါ။ ဘာတွေ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါလေ.. ကိုယ့်ရင်ထဲက မိဆိုးလေးကို ဆိုးလို့ကို စိုးရိမ်ကြီးစွာနဲ့ ချစ်တယ်...။
ဟုတ်တယ်.. မိဆိုး..! ဘယ်တော့မှ မပြောင်းလည်းဘူး... တစ်သက်လုံး လှလှပပလေး သိမ်းထားမယ်.. နောက်ပြီး မင်းသိအောင်လည်း ကိုယ်ဘယ်တော့မှ ပြောဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။
Posted by Khin Lay Ngel at 4/30/2012 01:14:00 PM No comments:
စကားလုံး မရှိတဲ့ နေ့မှာ ကမ်းတွေကပျိုကျလို့ လေတွေက ခပ်ကြမ်းကြမ်း.. တဝုန်းဝုန်းနဲ့..! အသံမဲ့တဲ့ ည မှာတော့ စကားလုံးတွေ ကို ကိုယ်တိုင် ဖြိုချဖြစ်တယ်.. စာတွေအဖြစ်ပေါ့..!! အကောင်းအဆိုးတွေကို တိုင်ပင်ဖော် မဲ့တဲ့ နေ့ညတွေမှာ အရာရာဟာ မှုန်ဝါးမသွားပဲ ပိုပိုထင်းလို့လာနေပြန်တာ မမိုက်ဘူး..!!
“ခဲလေ သမျှ သဲရေကျ ပုလဲမြေခ သြော်..ကောင်းလေစွ...” တဲ့ မောင်မောင်ဇော်လတ်က ဆိုထားတယ်.. ကျွန်မ အဲ့ဒီ သီချင်းကို အရမ်းကြိုက်တယ် ဆိုတာ ရှင်လည်းအသိ.. ရှင်ကရော အခုလိုအချိန် ဘယ်လို သီချင်း မျိုး နဲ့ မွေ့ပျော် လို့ နေပါလိမ့်..!! သိချင် တယ် ဒါပေမဲ့.. မသိချင်ပြန်ဘူး..!!
အပိုင်းပိုင်း အစစ အတွေးတွေက ရောင်စုံ ဖန်ဂေါ်လီလုံးတွေလို ဟိုလိမ့် ဒီကပ်.. အတွေးတွေ အရောင်စုံ.. စိတ်တွေ လည်း ရောင်စုံ.. လွင့်ပျံ့မှုတွေကလည်း ရောင်စုံ.. တိမ်တွေပေါ် ခုန်တက်လိုက်.. မြေကို လျှိုး လိုက်.. ရေပြာပြာ မှာ ငုတ်လျှိုး ကူးခတ်လိုက်.. အမှောင်အတိပြီးတဲ့ စကြဝဠာရဲ့ အမည်းရောင် ကော်ဇော ထက် မှာ နားခို အိပ်စက်လိုက် နဲ့.. ကဲ.. ဘာ ကျန်သေးလဲ...!! ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့ "စိတ်.." ဟူးးးးး.......!!
ယဉ်တယ် ယဉ် တယ် နဲ့ ပြောပြောနေကြတဲ့ ဘန်းစကားက အတွေးမှာလာကပ်တော့ မချိပြုံးတစ်စက လှစ်ကနဲ.. ကလိ သလိုလို သရော် သလိုလို ကိုယ့်အပြုံးနဲ့ကိုယ် အဘိဇ္ဇာတွေပွားလို့.. အပြုံးက အသံ အဖြစ်ပြောင်း လို့ ခပ်အက်အက် ထရယ်မိပြန်ရော.. သြော်.. အရေးထဲ မောင်မောင်ဇော်လတ်က ပြန်ကျော့ နေပြန် ပါပြီ.. "အကုန်ပြည်ဖုံးကားချ.. သြော်... ကောင်းလေစွ..." တဲ့... အဟက်..!!
ဖန်တီးမှု တစ်ခု ဟာ ချိန်းကြိုး တစ်ခုသာ ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်.. ဆက်ထုံးမရှိဘဲ ကွင်းဆက်တွေနဲ့တင် ကြိုးဖြစ် မလာ ဘူး... ပုံပေါ်လာမဲ့ အရာတစ်ခုဟာ ရင်တွင်းဖြစ် ဟဲန်းမိတ် (လက်ဖြစ်) စစ်စစ် ဆက်ထုံးစစ်စစ်တွေနဲ့ ဆက်ထား တာ.. ဘာမှမဆိုင်ဘဲ တဒိန်းဒိန်း ခုန်လာတတ်တဲ့ ကိုယ့်ရင်ကိုလည်း ခပ်လန့်လန့်.. ကိုယ့်ကိုယ် ကို မှန် ထဲ ငဲ့ကြည့်ဖို့လေး ကို ရင်တွေခုန်နေ ပြန်ပါပကော.. အာ.. မဟုတ်သေးပါဘူး.. ငါ့နှယ်နော်..!!
စိတ်အစဉ် က အရှေ့ကိုယွန်း..၊ အနောက်ကိုပြန်..၊ တောင်ကိုကပ်..၊ မြောက်ကိုနှင်..၊ အနောက်တောင်မှာ ခဏ တန့် ရင်း သက်ပျင်းချ..၊ အရှေ့မြောက်မှာ ရှေ့တစ်လှမ်းတိုး နောက်တစ်လှမ်းပြန်ဆုတ်.. အနောက်မြောက် မှာ ခပ်ပြေပြေ ခြေဆင်း ထိုင်လို ထိုင်..၊ အရှေ့တောင်မှာ အားတွေထပ်ယူ..၊ ဘုရား.. ဘုရား..!! အရပ် ရှစ်မျက်နှာမှာ လုပ်ချင်တိုင်းကို လုပ်နေတော့တာပါလား... ရှုပ်ကုန်ပြီ... ဟေးးး.. ပြန်လာ ခဲ့ ငါ့ ခန္ဓာဆီ..!!
စိတ် နဲ့ ကိုယ် အကပ်မှာ လူက ယိုင်နဲ့နဲ့... အတွေးတွေက ခပ်ထုံထုံ.. နားက ထိုင်းလာသလိုလို.. အမြင် အာရုံတွေ က မှုန်ဝါးနေပြန် ပါရော လား..!! အသံတစ်ခု ထွက်ဖို့ကိုတောင် ကြိုးစားဖန်တီး ယူနေရပြန် သလိုလို.. သက်ပြင်း ကို မှုတ်ထုတ် ဖို့တောင် ဇောချွေးတွေ ပြန်လို့.. မောင်မောင်ဇော်လတ်သီချင်း ပြန်ကျော့ မလာ မှီ မသယ်နိုင် တဲ့ လက်နဲ့ ကဗျာကောက်စပ်... အို.. မပီပြင် လိုက်တာလေ..!!
ဘာမှ မဟုတ်တဲ့ စာတွေကို အဆက်စပ်မဲ့ ရေးရင်းစာပိုဒ်တွေဖြစ်.. လုပ်ဟ..!! ဒါသည်လည်း စိတ်အလိုပဲ မဟုတ်လေ လား..!! ဒီလိုနဲ့ ဒန် (မော်ဒန်) မကျ.. ဟန်မကျနဲ့ ချဉ်ခြင်းက တက်လာပြန်တော့.. ခပ်ရေးရေး အာရုံခံ လို့ နောက်တစ်ပုဒ် ကို ထပ်ရေး.. ဟားးးး... တကယ် မနိုင်ဘူးတော့ဘူး ဒီစိတ်ရယ်.....!!
အချိုဖက်ဖို့ ကြံ မခင်းနိုင်တဲ့ ငါ့စိုက်ခင်းမှာ...
Tuesday, February 10, 2008
Posted by Khin Lay Ngel at 4/30/2012 12:52:00 PM No comments: